August 2018 | Language Century Language Century
10:54 PM C-Dialogue , Chinese
ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာ ဈေးဆစ်တဲ့အကြောင်းလေးကို အပြန်အလှန် စကားပြောပုံစံလေးနဲ့ လေ့လာကြပါစို့။
☞ Lǎobǎn, zhè jiàn yīfu duōshao qián?
☞ လောင်းပန် ကျဲ့h ကျန့် ယီးဖုf တောရှောင်h ချန်
☞ ဆိုင်ရှင်၊ ဒီအင်္ကျီ ဘယ်လောက်ကျသလဲ။
☞ Yì qiān sān bǎi wǔ shí kuài.
☞ ယိချန်း စန်းပိုင် ဝူရှီh ခွိုက်
☞ ၁၃၅၀ ကျပါတယ်။
☞ Kěyǐ suàn piányi yìdiǎnr ma?
☞ ခဲယ်းယီ စွမ့် ဖြန်ယိ ယိတျန်r မား
☞ ဈေးနည်းနည်း လျှော့ပေးလို့ ရမလား။
☞ Hǎo ba! Shǎo suàn nǐ wǔ shí kuài hǎo le.
☞ ဟောင်ပါ့ ရှောင်h စွမ့် နီ ဝူရှီh ခွိုက် ဟောင်လဲာ့
☞ ကောင်းပါပြီ။ ခင်ဗျားကို ငါးဆယ်လျှော့ပေးလိုက်မယ်။
ဈေးဝယျတဲ့အခါမှာ ဈေးဆဈတဲ့အကွောငျးလေးကို အပွနျအလှနျ စကားပွောပုံစံလေးနဲ့ လလေ့ာကွပါစို့။
☞ လောငျးပနျ ကြဲ့h ကနျြ့ ယီးဖုf တောရှောငျh ခနျြ
☞ ဆိုငျရှငျ၊ ဒီအကငြ်္ီ ဘယျလောကျကသြလဲ။
☞ ယိခနျြး စနျးပိုငျ ဝူရှီh ခှိုကျ
☞ ၁၃၅၀ ကပြါတယျ။
☞ ခဲယျးယီ စှမျ့ ဖွနျယိ ယိတနျြr မား
☞ ဈေးနညျးနညျး လြှော့ပေးလို့ ရမလား။
☞ ဟောငျပါ့ ရှောငျh စှမျ့ နီ ဝူရှီh ခှိုကျ ဟောငျလဲာ့
☞ ကောငျးပါပွီ။ ခငျဗြားကို ငါးဆယျလြှော့ပေးလိုကျမယျ။
10:51 PM C-Dialogue , Chinese
ဈေးဝယ်တဲ့အခါ ဈေးဆစ်ကြတာ သဘာဝပါ။ တချို့က ဈေးဆစ်လို့ရတဲ့နေရာမှာ ဈေးဝယ်ကြရတာကို သဘောကျပါတယ်။
☞ Zài chāoshì mǎi dōngxi kěyǐ jiǎng jià ma?
☞ ဇိုက်z ချောင်းhရှစ်h မိုင် တုံး(င်)ရှိ ခဲယ်းယီ ကျန်(င်)ကျာ့ မား
☞ စူပါမားကက်မှာ ပစ္စည်းဝယ်ရင် ဈေးဆစ်လို့ရပါသလား။
☞ Bù xíng. Chāoshì de dōngxi shì bú èr jià de.
☞ ပုရှင်(င်) ချောင်းhရှစ်h တဲ့ တုံး(င်)ရှိ ရှစ်h ပူအဲာ့rကျာ့ တဲ့
☞ မရပါဘူး။ စူပါမားကက်က တစ်ခွန်းဈေးပါ။
☞ Nǎr kěyǐ jiǎng jià?
☞ နာr ခဲယ်းယီ ကျန်(င်)ကျာ့
☞ ဘယ်နေရာမှာ ဈေးဆစ်လို့ရမလဲ။
ဈေးဝယျတဲ့အခါ ဈေးဆဈကွတာ သဘာဝပါ။ တခြို့က ဈေးဆဈလို့ရတဲ့နရောမှာ ဈေးဝယျကွရတာကို သဘောကပြါတယျ။
☞ ဇိုကျz ခြောငျးhရှဈh မိုငျ တုံး(ငျ)ရှိ ခဲယျးယီ ကနျြ(ငျ)ကြာ့ မား
☞ စူပါမားကကျမှာ ပစ်စညျးဝယျရငျ ဈေးဆဈလို့ရပါသလား။
☞ ပုရှငျ(ငျ) ခြောငျးhရှဈh တဲ့ တုံး(ငျ)ရှိ ရှဈh ပူအဲာ့rကြာ့ တဲ့
☞ မရပါဘူး။ စူပါမားကကျက တဈခှနျးဈေးပါ။
☞ နာr ခဲယျးယီ ကနျြ(ငျ)ကြာ့
☞ ဘယျနရောမှာ ဈေးဆဈလို့ရမလဲ။
9:06 PM C-Dialogue , Chinese
အားကစားလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်တည်း လုပ်တာထက်စာရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ လုပ်ရတာက ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
☞ Yí ge rén yùndòng yǒu yìsi ma?
☞ ယီကဲာ့ ရဲင်r ယွင့်တုံ့(င်) ယို ယိစိ မား
☞ တစ်ယောက်တည်း အားကစားလုပ်ရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိလား။
☞ Yí ge rén yùndòng hěn wúliáo.
☞ ယီကဲာ့ ရဲင်r ယွင့်တုံ့(င်) ဟဲင် ဝူးလျောင်
☞ တစ်ယောက်တည်း အားကစားလုပ်ရတာ အရမ်း ပျင်းစရာကောင်းတယ်။
☞ Gēn péngyǒu yùndòng yǒu yìsi ma?
☞ ကဲင်း ဖဲင်း(င်)ယို ယွင့်တုံ့(င်) ယို ယိစိ မား
☞ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အားကစားလုပ်ရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိလား။
☞ Gēn péngyǒu yùndòng bǐ yí ge rén yùndòng yǒu yìsi duō le.
☞ ကဲင်း ဖဲင်း(င်)ယို ယွင့်တုံ့(င်) ပီ ယီကဲာ့ ရဲင်r ယွင့်တုံ့(င်) ယို ယိစိ တော လဲာ့
☞ တစ်ယောက်တည်း အားကစားလုပ်တာနဲ့ ယှဉ်ရင်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အာကစားလုပ်တာက ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။
အားကစားလုပျကွတဲ့အခါမှာ တဈယောကျတညျး လုပျတာထကျစာရငျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ လုပျရတာက ပိုပွီး ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။
☞ ယီကဲာ့ ရဲငျr ယှငျ့တုံ့(ငျ) ယို ယိစိ မား
☞ တဈယောကျတညျး အားကစားလုပျရတာ အဓိပ်ပာယျရှိလား။
☞ ယီကဲာ့ ရဲငျr ယှငျ့တုံ့(ငျ) ဟဲငျ ဝူးလြောငျ
☞ တဈယောကျတညျး အားကစားလုပျရတာ အရမျး ပငျြးစရာကောငျးတယျ။
☞ ကဲငျး ဖဲငျး(ငျ)ယို ယှငျ့တုံ့(ငျ) ယို ယိစိ မား
☞ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အားကစားလုပျရတာ အဓိပ်ပာယျရှိလား။
☞ ကဲငျး ဖဲငျး(ငျ)ယို ယှငျ့တုံ့(ငျ) ပီ ယီကဲာ့ ရဲငျr ယှငျ့တုံ့(ငျ) ယို ယိစိ တော လဲာ့
☞ တဈယောကျတညျး အားကစားလုပျတာနဲ့ ယှဉျရငျ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အာကစားလုပျတာက ပိုပွီး အဓိပ်ပာယျရှိပါတယျ။
7:58 PM C-Dialogue , Chinese
နှိုင်းယှဉ်မှုကို ဖော်ပြတဲ့ စကားပြောပုံစံ ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကိုးကားလေ့လာကြည့်ပါ။
☞ Jīntiān rè bú rè?
☞ ကျင်းထျန်း ရဲ့r ပူ ရဲ့r
☞ ဒီနေ့ ပူသလား။
☞ Jīntiān bú tài rè.
☞ ကျင်းထျန်း ပူ ထိုက် ရဲ့r
☞ ဒီနေ့ သိပ်မပူပါ။
☞ Gēn zuótiān bǐ zěnme yàng?
☞ ကဲင်း ဇော်zထျန်း ပီ ဇဲင်zမဲာ့ယန့်(င်)
☞ မနေ့ကနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘယ်လိုလဲ။
☞ Gēn zuótiān bǐ, jīntiān méiyǒu zuótiān nàme rè. Zuótiān bǐ jīntiān rè duō le.
☞ ကဲင်း ဇော်zထျန်း ပီ ကျင်းထျန်း မေးယို ဇော်zထျန်း နာ့မဲာ့ ရဲ့r ဇော်zထျန်း ပီ ကျင်းထျန်း ရဲ့r တော လဲာ့
☞ မနေ့ကနဲ့ ယှဉ်ရင်၊ ဒီနေ့က မနေ့ကလောက် မပူပါဘူး။မနေ့က ဒီနေ့ထက် ပိုပူပါတယ်။
နှိုငျးယှဉျမှုကို ဖျောပွတဲ့ စကားပွောပုံစံ ဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးထားပါတယျ။ ကိုးကားလလေ့ာကွညျ့ပါ။
☞ ကငျြးထနျြး ရဲ့r ပူ ရဲ့r
☞ ဒီနေ့ ပူသလား။
☞ ကငျြးထနျြး ပူ ထိုကျ ရဲ့r
☞ ဒီနေ့ သိပျမပူပါ။
☞ ကဲငျး ဇျောzထနျြး ပီ ဇဲငျzမဲာ့ယနျ့(ငျ)
☞ မနကေ့နဲ့ ယှဉျရငျ ဘယျလိုလဲ။
☞ ကဲငျး ဇျောzထနျြး ပီ ကငျြးထနျြး မေးယို ဇျောzထနျြး နာ့မဲာ့ ရဲ့r ဇျောzထနျြး ပီ ကငျြးထနျြး ရဲ့r တော လဲာ့
☞ မနကေ့နဲ့ ယှဉျရငျ၊ ဒီနကေ့ မနကေ့လောကျ မပူပါဘူး။မနကေ့ ဒီနထေ့ကျ ပိုပူပါတယျ။
7:55 PM C-Dialogue , Chinese
နေမကောင်းလို့ ရုံးကနေ ဖျားနာခွင့်ယူတဲ့အကြောင်းလေးကို လေ့လာနိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Zuótiān tā qǐngjià méi lái.
☞ ဇော်zထျန်း ထား ချင်(င်)ကျာ့ မေး လိုင်
☞ မနေ့က သူခွင့်ယူလို့ မလာတာပါ။
☞ Zěnme le?
☞ ဇဲင်zမဲာ့ လဲာ့
☞ Yīnwèi tā shēngbìng le.
☞ ယင်းဝေ့ ထား ရှဲင်းh(င်)ပျင့်(င်) လဲာ့
☞ သူ ဖျားလို့ပါ။
☞ Tā qǐng jǐ tiān jià?
☞ ထား ချင်(င်) ကျီ ထျန်း ကျာ့
☞ သူ ခွင့်ဘယ်နှစ်ရက်ယူတာလဲ။
☞ Tā qǐng sān tiān bìngjià.
☞ ထား ချင်(င်) စန်း ထျန်း ပျင့်(င်)ကျာ့
☞ သူ ဖျားနာခွင့်သုံးရက် ယူပါတယ်။
နမေကောငျးလို့ ရုံးကနေ ဖြားနာခှငျ့ယူတဲ့အကွောငျးလေးကို လလေ့ာနိုငျစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ဇျောzထနျြး ထား ခငျြ(ငျ)ကြာ့ မေး လိုငျ
☞ မနကေ့ သူခှငျ့ယူလို့ မလာတာပါ။
☞ ဇဲငျzမဲာ့ လဲာ့
☞ ယငျးဝေ့ ထား ရှဲငျးh(ငျ)ပငျြ့(ငျ) လဲာ့
☞ သူ ဖြားလို့ပါ။
☞ ထား ခငျြ(ငျ) ကြီ ထနျြး ကြာ့
☞ သူ ခှငျ့ဘယျနှဈရကျယူတာလဲ။
☞ ထား ခငျြ(ငျ) စနျး ထနျြး ပငျြ့(ငျ)ကြာ့
☞ သူ ဖြားနာခှငျ့သုံးရကျ ယူပါတယျ။
7:18 PM C-Sentence , Chinese
မွေးနေ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပြောပုံစံ ဝါကျတိုလေးတွေကို ကိုးကားလေ့ကျင့်နိုင်စေဖို့ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Jīntiān shì wǒ de shēngrì.
☞ ကျင်းထျန်း ရှစ်h ဝေါ် တဲ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r
☞ ဒီနေ့က ငါ့မွေးနေ့ပါ။
☞ Zhù nǐ shēngrì kuàilè!
☞ ကျုh နီ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r ခွိုက်လဲာ့
☞ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
☞ Bàba de shēngrì shì xiàge yuè wǔ hào.
☞ ပါ့ပါ့ တဲ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r ရှစ်h ရှာ့ကဲာ့ယွဲ့ ဝူဟောက်
☞ ဖေဖေ့မွေးနေ့က လာမယ့်လ ငါးရက်နေ့ပါ။
☞ Nǐ zhīdào wǒ de shēngrì ma?
☞ နီ ကျီးhတောက် ဝေါ် တဲ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r မား
☞ နင် ငါ့မွေးနေ့ကို သိလား။
☞ Tā de shēngrì shì bā yuè jǐ hào?
☞ ထား တဲ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r ရှစ်h ပါးယွဲ့ ကျီဟောက်
☞ သူ့မွေးနေ့က သြဂုတ်လ ဘယ်နှစ်ရက်နေ့လဲ။
☞ Nǐ de shēngrì shì yī yuè sān hào ma?
☞ နီ တဲ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r ရှစ်h ယီးယွဲ့ စန်းဟောက် မား
☞ နင့်မွေးနေ့က ဇန်နဝါရီလ၊ ၃ ရက်နေ့လား။
☞ Tā lái cānjiā nǐ de shēngrì huì ma?
☞ ထား လိုင် ဆန်းကျား နီ တဲ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်rဟွေ့ မား
☞ နင့်မွေးနေ့ပွဲကို သူ လာမှာလား။
☞ Tā gěi mèimei shénme shēngrì lǐwù?
☞ ထား ကေ မေ့မေ ရှဲhမဲာ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r လီဝု
☞ သူ ညီမလေးကို ဘာမွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးတာလဲ။
☞ Zuótiān shì nǐ de shēngrì, shì bú shì?
☞ ဇော်zထျန်း ရှစ်h နီ တဲ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r ရှစ်h ပူ ရှစ်h
☞ မနေ့က နင့်မွေးနေ့နော်၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
☞ Nǐ gěi tā shénme shēngrì lǐwù?
☞ နီး ကေ ထား ရှဲhမဲာ့ ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r လီဝု
☞ နင် သူ့ကို မွေးနေ့လက်ဆောင် ဘာပေးလိုက်လဲ။
မှေးနနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ စကားပွောပုံစံ ဝါကတြိုလေးတှကေို ကိုးကားလကေ့ငျြ့နိုငျစဖေို့ စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ကငျြးထနျြး ရှဈh ဝျေါ တဲ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr
☞ ဒီနကေ့ ငါ့မှေးနပေ့ါ။
☞ ကြုh နီ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr ခှိုကျလဲာ့
☞ မှေးနမှေ့ာ ပြျောရှငျပါစေ။
☞ ပါ့ပါ့ တဲ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr ရှဈh ရှာ့ကဲာ့ယှဲ့ ဝူဟောကျ
☞ ဖဖေမှေ့ေးနကေ့ လာမယျ့လ ငါးရကျနပေ့ါ။
☞ နီ ကြီးhတောကျ ဝျေါ တဲ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr မား
☞ နငျ ငါ့မှေးနကေို့ သိလား။
☞ ထား တဲ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr ရှဈh ပါးယှဲ့ ကြီဟောကျ
☞ သူ့မှေးနကေ့ သွဂုတျလ ဘယျနှဈရကျနလေဲ့။
☞ နီ တဲ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr ရှဈh ယီးယှဲ့ စနျးဟောကျ မား
☞ နငျ့မှေးနကေ့ ဇနျနဝါရီလ၊ ၃ ရကျနလေ့ား။
☞ ထား လိုငျ ဆနျးကြား နီ တဲ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျrဟှေ့ မား
☞ နငျ့မှေးနပှေဲ့ကို သူ လာမှာလား။
☞ ထား ကေ မမေ့ေ ရှဲhမဲာ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr လီဝု
☞ သူ ညီမလေးကို ဘာမှေးနလေ့ကျဆောငျ ပေးတာလဲ။
☞ ဇျောzထနျြး ရှဈh နီ တဲ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr ရှဈh ပူ ရှဈh
☞ မနကေ့ နငျ့မှေးနနေ့ျော၊ ဟုတျတယျဟုတျ။
☞ နီး ကေ ထား ရှဲhမဲာ့ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr လီဝု
☞ နငျ သူ့ကို မှေးနလေ့ကျဆောငျ ဘာပေးလိုကျလဲ။
မွေးနေ့ - မှေးနေ့ - shengri - sheng ri - sheng1 ri4 - shēng rì - 生日 - birthday - Birthday - BIRTHDAY
သင်ယူလေ့လာခြင်း - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
7:14 PM C-Sentence , Chinese
ဘာသာစကား တစ်ခုခုကို သင်ယူလေ့လာနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုတတ်စေဖို့ နမူနာဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
☞ Tā zài xuéxí shénme?
☞ ထား ဇိုက်z ရွှဲရှီ ရှဲhမဲာ့
☞ သူ ဘာလေ့လာနေတာလဲ။
☞ Tā zài xuéxí Hànyǔ ma?
☞ ထား ဇိုက်z ရွှဲရှီ ဟန့်ယွီ မား
☞ သူ တရုတ်စကား လေ့လာတာလား။
☞ Wǒ dǎsuàn xuéxí Hànyǔ.
☞ ဝေါ တာစွမ့် ရွှဲရှီ ဟန့်ယွီ
☞ ငါ တရုတ်စကားသင်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။
☞ Wǒ bù xiǎng xuéxí Rìyǔ.
☞ ဝေါ် ပု ရှန်(င်) ရွှဲရှီ ရွတ်rယွီ
☞ ငါ ဂျပန်စကား မသင်ချင်ဘူး။
☞ Nǐ wèishénme bù xiǎng xuéxí Hányǔ?
☞ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပု ရှန်(င်) ရွှဲရှီ ဟန်းယွီ
☞ နင် ဘာလို့ ကိုရီးယားစကား မသင်ချင်တာလဲ။
☞ Nǐ xiǎng xuéxí shénme?
☞ နီး ရှန်(င်) ရွှဲရှီ ရှဲhမဲာ့
☞ နင် ဘာကို လေ့လာချင်တာလဲ။
☞ Tā yě bù xuéxí Rìyǔ.
☞ ထား ယယ် ပု ရွှဲရှီ ရွတ်rယွီ
☞ သူလည်း ဂျပန်စကား မသင်ပါဘူး။
☞ Nǐ bù xiǎng xuéxí Rìyǔ ma?
☞ နီ ပု ရှန်(င်) ရွှဲရှီ ရွတ်rယွီ မား
☞ နင် ဂျပန်စကား မသင်ယူချင်ဘူးလား။
☞ Wǒ yīnggāi xuéxí Yīngyǔ ma?
☞ ဝေါ် ယင်း(င်)ကိုင်း ရွှဲရှီ ယင်း(င်)ယွီ မား
☞ ငါ အင်္ဂလိပ်စကား သင်ယူသင့်လား။
☞ Nǐ xuéxí Hànyǔ háishì xuéxí Rìyǔ?
☞ နီ ရွှဲရှီ ဟန့်ယွီ ဟိုင်ရှစ်h ရွှဲရှီ ရွတ်rယွီ
☞ နင် တရုတ်စကား လေ့လာမှာလား၊ ဂျပန်စကား လေ့လာမှာလား။
သငျယူလလေ့ာခွငျး - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
ဘာသာစကား တဈခုခုကို သငျယူလလေ့ာနတောနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောဆိုတတျစဖေို့ နမူနာဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးထားပါတယျ။
☞ ထား ဇိုကျz ရှဲရှီ ရှဲhမဲာ့
☞ သူ ဘာလလေ့ာနတောလဲ။
☞ ထား ဇိုကျz ရှဲရှီ ဟနျ့ယှီ မား
☞ သူ တရုတျစကား လလေ့ာတာလား။
☞ ဝေါ တာစှမျ့ ရှဲရှီ ဟနျ့ယှီ
☞ ငါ တရုတျစကားသငျဖို့ စိတျကူးထားတယျ။
☞ ဝျေါ ပု ရှနျ(ငျ) ရှဲရှီ ရှတျrယှီ
☞ ငါ ဂပြနျစကား မသငျခငျြဘူး။
☞ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပု ရှနျ(ငျ) ရှဲရှီ ဟနျးယှီ
☞ နငျ ဘာလို့ ကိုရီးယားစကား မသငျခငျြတာလဲ။
☞ နီး ရှနျ(ငျ) ရှဲရှီ ရှဲhမဲာ့
☞ နငျ ဘာကို လလေ့ာခငျြတာလဲ။
☞ ထား ယယျ ပု ရှဲရှီ ရှတျrယှီ
☞ သူလညျး ဂပြနျစကား မသငျပါဘူး။
☞ နီ ပု ရှနျ(ငျ) ရှဲရှီ ရှတျrယှီ မား
☞ နငျ ဂပြနျစကား မသငျယူခငျြဘူးလား။
☞ ဝျေါ ယငျး(ငျ)ကိုငျး ရှဲရှီ ယငျး(ငျ)ယှီ မား
☞ ငါ အင်ျဂလိပျစကား သငျယူသငျ့လား။
☞ နီ ရှဲရှီ ဟနျ့ယှီ ဟိုငျရှဈh ရှဲရှီ ရှတျrယှီ
☞ နငျ တရုတျစကား လလေ့ာမှာလား၊ ဂပြနျစကား လလေ့ာမှာလား။
သင်ယူ - သင်ယူခြင်း - သင်ယူတယ် - သင်ယူသည် - လေ့လာ - လေ့လာခြင်း - လေလာတယ် - လေ့လာသည် - သင်ယူလေ့လာ - သငျယူ - သငျယူခွငျး - သငျယူတယျ - သငျယူသညျ - လလေ့ာ - လလေ့ာခွငျး - လလောတယျ - လလေ့ာသညျ - သငျယူလလေ့ာ - xuexi - xue xi - xue2 xi2 - xué xí - 学习 - 學習 - study - Study - learn - Learn
10:00 PM C-Sentence , Chinese
စာအုပ်သွားဝယ်ချင်တဲ့အခါ ပြောဆိုရမယ့် စကားပြောဝါကျလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Nǐ yǒu méiyǒu shū?
နီး ယို မေးယို ရှူးh
ဝေါ ယို လျန်း(င်) ပဲင် ရှူးh
ငါ့မှာ စာအုပ်နှစ်အုပ် ရှိတယ်။
Fùjìn yǒu shūdiàn ma?
ဖုfကျင့် ယို ရှူးhတျန့် မား
Qiánbian yǒu yì jiā shūdiàn.
ချန်ပြန်း ယို ယိ ကျား ရှူးhတျန့်
ရှေ့ဘက်မှာ စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရှိတယ်။
Wǒ xiǎng mǎi wǔ běn shū.
ဝေါ ရှန်း(င်) မိုင် ဝူး ပဲင် ရှူးh
ငါ စာအုပ်ငါးအုပ် ဝယ်ချင်တယ်။
Wǒmen yìqǐ qù mǎi ba.
ဝေါ်မဲင် ယိချီ ချွိ မိုင် ပါ့
ငါတို့ အတူတူ သွားဝယ်ကြမယ်လေ။
ရှဲ့ရှဲ့ နီ တဲ့ ပန်း(င်)ကျုh
မင်း ကူညီတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စာအုပျသှားဝယျခငျြတဲ့အခါ ပွောဆိုရမယျ့ စကားပွောဝါကလြေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးထားပါတယျ။
နီး ယို မေးယို ရှူးh
ဝေါ ယို လနျြး(ငျ) ပဲငျ ရှူးh
ငါ့မှာ စာအုပျနှဈအုပျ ရှိတယျ။
ဖုfကငျြ့ ယို ရှူးhတနျြ့ မား
ခနျြပွနျး ယို ယိ ကြား ရှူးhတနျြ့
ရှဘေ့ကျမှာ စာအုပျဆိုငျတဈဆိုငျ ရှိတယျ။
ဝေါ ရှနျး(ငျ) မိုငျ ဝူး ပဲငျ ရှူးh
ငါ စာအုပျငါးအုပျ ဝယျခငျြတယျ။
ဝျေါမဲငျ ယိခြီ ခြှိ မိုငျ ပါ့
ငါတို့ အတူတူ သှားဝယျကွမယျလေ။
ရှဲ့ရှဲ့ နီ တဲ့ ပနျး(ငျ)ကြုh
မငျး ကူညီတာကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Posted by Su Yi Htike
မီးရထားစီးတာဟာ စရိတ်ကို ချွေတာရာရောက်သလို၊ အချိန်လည်း တိကျမှုရှိပါတယ်။ သင်ရော ရထားစီးရတာ ကြိုက်သလား။
☞ Tā zuò huǒchē.
☞ ထား ဇော့z ဟော်ချဲh
☞ သူ မီးရထား စီးတယ်။
☞ Nǐ zuò huǒchē ma?
☞ နီ ဇော့z ဟော်ချဲh မား
☞ နင် ရထား စီးမှာလား။
☞ Tā gēn bàba zuò huǒchē qù.
☞ ထား ကဲင်း ပါ့ပါ ဇော့z ဟော်ချဲh ချွိ
☞ သူ ဖေဖေနဲ့ ရထားစီးပြီး သွားတယ်။
☞ Māma qù mǎi huǒchēpiào.
☞ မားမား ချွိ မိုင် ဟော်ချဲhဖျောက်
☞ မေမေ ရထားလက်မှတ် သွားဝယ်တယ်။
☞ Gēge qù huǒchēzhàn.
☞ ကဲယ်းကဲယ့် ချွိ ဟော်ချဲhကျန့်h
☞ ကိုကို ဘူတာရုံကို သွားတယ်။
☞ Měiyǒu huǒchē piào le.
☞ မေးယို ဟော်ချဲhဖျောက် လဲာ့
☞ ရထားလက်မှတ် မရှိတော့ဘူး။
☞ Wǒmen zuò kuàichē ma?
☞ ဝေါ်မဲင် ဇော့z ဟော်ချဲh မား
☞ ငါတို့ အမြန်ရထား စီးကြမလား။
☞ Tā zuò dìtiě qù bàngōngshì.
☞ ထား ဇော့z တိထျယ် ချွိ ပန့်ကုံး(င်)ရှစ်h
☞ သူ ရုံးကို မြေအောက်ရထား စီးသွားတယ်။
☞ Nǐ wèishénme bú zuò kuàichē?
☞ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပူ ဇော့z ခွိုက်ချဲh
☞ နင် ဘာကြောင့် အမြန်ရထား မစီးတာလဲ။
မီးရထားစီးတာဟာ စရိတျကို ခြှတောရာရောကျသလို၊ အခြိနျလညျး တိကမြှုရှိပါတယျ။ သငျရော ရထားစီးရတာ ကွိုကျသလား။
☞ ထား ဇော့z ဟျောခြဲh
☞ သူ မီးရထား စီးတယျ။
☞ နီ ဇော့z ဟျောခြဲh မား
☞ နငျ ရထား စီးမှာလား။
☞ ထား ကဲငျး ပါ့ပါ ဇော့z ဟျောခြဲh ခြှိ
☞ သူ ဖဖေနေဲ့ ရထားစီးပွီး သှားတယျ။
☞ မားမား ခြှိ မိုငျ ဟျောခြဲhဖြောကျ
☞ မမေေ ရထားလကျမှတျ သှားဝယျတယျ။
☞ ကဲယျးကဲယျ့ ခြှိ ဟျောခြဲhကနျြ့h
☞ ကိုကို ဘူတာရုံကို သှားတယျ။
☞ မေးယို ဟျောခြဲhဖြောကျ လဲာ့
☞ ရထားလကျမှတျ မရှိတော့ဘူး။
☞ ဝျေါမဲငျ ဇော့z ဟျောခြဲh မား
☞ ငါတို့ အမွနျရထား စီးကွမလား။
☞ ထား ဇော့z တိထယျြ ခြှိ ပနျ့ကုံး(ငျ)ရှဈh
☞ သူ ရုံးကို မွအေောကျရထား စီးသှားတယျ။
☞ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပူ ဇော့z ခှိုကျခြဲh
☞ နငျ ဘာကွောငျ့ အမွနျရထား မစီးတာလဲ။
မီးရထား - ရထား - မီးရထား - ရထား - huoche - huo che - huo3 che1 - huǒ chē - 火车 - 火車 - train - Train - TRAIN
9:46 PM C-Dialogue , Chinese
တရုတ်စကား အခြေခံကို စတင်လေ့လာနေကြသူများအတွက် နာမည်မေးခြင်း သင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာကြည့်ပါနော်။
☞ Nǐ hǎo.
☞ နီး ဟောင်
☞ Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzì?
☞ နီး ဟောင် နီ ကျောက် ရှဲhမဲာ့ မျင်(င်)ဇစ်z
☞ မင်္ဂလာပါ၊ နင့်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
☞ Wǒ jiào Wáng Píng. Nǐ ne?
☞ ဝေါ် ကျောက် ဝမ်း(င်)ဖျင်(င်) နီ နဲ
☞ ငါ့နာမည်က ဝမ်းဖိန်ပါ။ နင်ရော။
☞ Wǒ jiào lǐ lì.
☞ ဝေါ် ကျောက် လီလိ
☞ ငါ့နာမည်က လီလီပါ။
တရုတျစကား အခွခေံကို စတငျလလေ့ာနကွေသူမြားအတှကျ နာမညျမေးခွငျး သငျခနျးစာလေးကို လလေ့ာကွညျ့ပါနျော။
☞ နီး ဟောငျ
☞ နီး ဟောငျ နီ ကြောကျ ရှဲhမဲာ့ မငျြ(ငျ)ဇဈz
☞ မင်ျဂလာပါ၊ နငျ့နာမညျ ဘယျလိုချေါလဲ။
☞ ဝျေါ ကြောကျ ဝမျး(ငျ)ဖငျြ(ငျ) နီ နဲ
☞ ငါ့နာမညျက ဝမျးဖိနျပါ။ နငျရော။
☞ ဝျေါ ကြောကျ လီလိ
☞ ငါ့နာမညျက လီလီပါ။
10:09 AM C-Sentence , Chinese
တချို့က အသား စားကြတယ်။ တချို့က အသား မစားကြပါ။ သင်ရော ဘာအသား စားပါသလဲ။
☞ Nǐ chī ròu ma?
☞ နီ ချီးh ရို့r မား
☞ နင် အသား စားလား။
☞ Wǒ bù chī ròu.
☞ ဝေါ် ပု ချီးh ရို့r
☞ ငါ အသား မစားဘူး။
☞ Nǐ chī niúròu ma?
☞ နီ ချီးh နျိုရို့r မား
☞ နင် အမဲသား စားလား။
☞ Wǒ bù xǐhuan niúròu.
☞ ဝေါ် ပု ရှီဟွမ်း နျိုရို့r
☞ ငါ အမဲသား မကြိုက်ဘူး။
☞ Nǐ mǎi jīròu chǎomiàn lái ma?
☞ နီး မိုင် ကျီးရို့r ချောင်hမြန့် လိုင် မား
☞ နင် ကြက်သားခေါက်ဆွဲကြော် ဝယ်လာတာလား။
☞ Nǐ wèishénme bù chī ròu?
☞ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပု ချီးh ရို့r
☞ နင် ဘာလို့ အသား မစားတာလဲ။
☞ Māma bù chī yángròu.
☞ မားမာ့ ပု ချီးh ယန်(င်)ရို့r
☞ မေမေက ဆိတ်သား မစားဘူး။
☞ Tā chī zhūròu ma?
☞ ထား ချီးh ကျူးhရို့r မား
☞ သူ ဝက်သား စားလား။
☞ Wǒ xǐhuan chī yāròu.
☞ ဝေါ ရှီဟွမ်း ချီးh ယားရို့r
☞ ငါ ဘဲသား စားရတာ ကြိုက်တယ်။
☞ Dìdi bù chī jīròu ma?
☞ တိတီ ပု ချီးh ကျီးရို့r မား
☞ ညီလေး ကြက်သား မစားဘူးလား။
တခြို့က အသား စားကွတယျ။ တခြို့က အသား မစားကွပါ။ သငျရော ဘာအသား စားပါသလဲ။
☞ နီ ခြီးh ရို့r မား
☞ နငျ အသား စားလား။
☞ ဝျေါ ပု ခြီးh ရို့r
☞ နီ ခြီးh နြိုရို့r မား
☞ နငျ အမဲသား စားလား။
☞ ဝျေါ ပု ရှီဟှမျး နြိုရို့r
☞ ငါ အမဲသား မကွိုကျဘူး။
☞ နီး မိုငျ ကြီးရို့r ခြောငျhမွနျ့ လိုငျ မား
☞ နငျ ကွကျသားခေါကျဆှဲကွျော ဝယျလာတာလား။
☞ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပု ခြီးh ရို့r
☞ နငျ ဘာလို့ အသား မစားတာလဲ။
☞ မားမာ့ ပု ခြီးh ယနျ(ငျ)ရို့r
☞ မမေကေ ဆိတျသား မစားဘူး။
☞ ထား ခြီးh ကြူးhရို့r မား
☞ သူ ဝကျသား စားလား။
☞ ဝေါ ရှီဟှမျး ခြီးh ယားရို့r
☞ ငါ ဘဲသား စားရတာ ကွိုကျတယျ။
☞ တိတီ ပု ခြီးh ကြီးရို့r မား
☞ ညီလေး ကွကျသား မစားဘူးလား။
အသား - အသား - rou - rou4 - ròu - 肉 - meat - Meat - MEAT
9:54 AM C-Sentence , Chinese
နှင်းဆီပန်းကို တော်တော်များများက ကြိုက်ကြပါတယ်။ နှင်းဆီပန်းရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပန်း မို့လို့ပါ။
☞ Tā mài méiguīhuā.
☞ ထား မိုက် မေကွေးဟွား
☞ သူ နှင်းဆီပန်း ရောင်းတယ်။
☞ Nǐ mǎi méiguīhuā lái ma?
☞ နီး မိုင် မေကွေးဟွား လိုင် မား
☞ နင် နှင်းဆီပန်း ဝယ်လာတာလား။
☞ Jǐ duǒ méiguīhuā?
☞ ကျီး တော် မေကွေးဟွား
☞ နှင်းဆီပန်း ဘယ်နှစ်ပွင့်လဲ။
☞ Nǐ xǐhuan shénme yánsè de méiguīhuā?
☞ နီး ရှီဟွမ်း ရှဲhမဲာ့ ယန်စဲ့ တဲ့ မေကွေးဟွား
☞ နင် နှင်းဆီပန်း ဘာရောင်ကြိုက်လဲ။
☞ Wǒ xǐhuan hóngsè de méiguīhuā.
☞ ဝေါ ရှီဟွမ်း ဟုန်(င်)စဲ့ တဲ့ မေကွေးဟွား
☞ ငါ နှင်းဆီပန်း အနီရောင် ကြိုက်တယ်။
☞ Tā wèishénme gěi nǐ méiguīhuā?
☞ ထား ဝေ့ရှဲhမာ့ ကေး နီ မေကွေးဟွား
☞ သူ နင့်ကို ဘာလို့ နှင်းဆီပန်း ပေးတာလဲ။
☞ Māma bù xǐhuan huángsè de méiguīhuā.
☞ မားမာ့ ပု ရှီဟွမ်း ဟွမ်(င်)စဲ့ တဲ့ မေကွေးဟွား
☞ မေမေက နှင်းဆီပန်းအဝါ မကြိုက်ဘူး။
☞ Nǐ wèishénme bù xǐhuan méiguīhuā?
☞ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပု ရှီဟွမ်း မေကွေးဟွား
☞ နင်ဘာလို့ နှင်းဆီပန်း မကြိုက်တာလဲ။
☞ Nǐ xǐhuan méiguī wèi ma?
☞ နီး ရှီဟွမ်း မေကွေးဝေ့ မား
☞ နှင်းဆီနံ့ ကြိုက်လား။
☞ Shéi gěi tā méiguīhuā?
☞ ရှေးh ကေ ထား မေကွေးဟွား
☞ ဘယ်သူက သူ့ကို နှင်းဆီပန်း ပေးတာလဲ။
နှငျးဆီပနျးကို တျောတျောမြားမြားက ကွိုကျကွပါတယျ။ နှငျးဆီပနျးရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ကိုယျစားပွုတဲ့ပနျး မို့လို့ပါ။
☞ ထား မိုကျ မကှေေးဟှား
☞ သူ နှငျးဆီပနျး ရောငျးတယျ။
☞ နီး မိုငျ မကှေေးဟှား လိုငျ မား
☞ နငျ နှငျးဆီပနျး ဝယျလာတာလား။
☞ ကြီး တျော မကှေေးဟှား
☞ နှငျးဆီပနျး ဘယျနှဈပှငျ့လဲ။
☞ နီး ရှီဟှမျး ရှဲhမဲာ့ ယနျစဲ့ တဲ့ မကှေေးဟှား
☞ နငျ နှငျးဆီပနျး ဘာရောငျကွိုကျလဲ။
☞ ဝေါ ရှီဟှမျး ဟုနျ(ငျ)စဲ့ တဲ့ မကှေေးဟှား
☞ ငါ နှငျးဆီပနျး အနီရောငျ ကွိုကျတယျ။
☞ ထား ဝရှေဲ့hမာ့ ကေး နီ မကှေေးဟှား
☞ သူ နငျ့ကို ဘာလို့ နှငျးဆီပနျး ပေးတာလဲ။
☞ မားမာ့ ပု ရှီဟှမျး ဟှမျ(ငျ)စဲ့ တဲ့ မကှေေးဟှား
☞ မမေကေ နှငျးဆီပနျးအဝါ မကွိုကျဘူး။
☞ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပု ရှီဟှမျး မကှေေးဟှား
☞ နငျဘာလို့ နှငျးဆီပနျး မကွိုကျတာလဲ။
☞ နီး ရှီဟှမျး မကှေေးဝေ့ မား
☞ နှငျးဆီနံ့ ကွိုကျလား။
☞ ရှေးh ကေ ထား မကှေေးဟှား
☞ ဘယျသူက သူ့ကို နှငျးဆီပနျး ပေးတာလဲ။
နှင်းဆီပန်း - နှင်းဆီပန်း - နှငျးဆီပနျး - နှငျးဆီပနျး - méi guī huā - mei2 gui1 hua1 - meiguihua - mei gui hua - rose - Rose - ROSE - 玫瑰花
9:50 AM C-Dialogue , Chinese
တရုတ်စကားကို စတင်လေ့လာနေကြသူများအတွက် အခြေခံအကျဆုံး နှုတ်ဆက်ပုံလေးကို လေ့လာထားပါနော်။
☞ Zǎoshang hǎo.
☞ ဇောင်zရှန့်h(င်) ဟောင်
☞ မင်္ဂလာ မနက်ခင်းပါ။
☞ Zǎoshang hǎo. Nǐ hǎo ma?
☞ ဇောင်zရှန့်h(င်) ဟောင် နီး ဟောင် မား
☞ မင်္ဂလာ မနက်ခင်းပါ။ နင် နေကောင်းလား။
☞ ဝေါ် ဟဲင်း ဟောင် နီ နဲ
☞ ငါ နေကောင်းပါတယ်။ နင်ရော။
☞ Wǒ yě hěn hǎo. Xiè xiè.
☞ ဝေါ ယဲ ဟဲင်း ဟောင် ရှဲ့ရှဲ့
☞ ငါလည်း နေကောင်းပါတယ်။ ကျေးဇူးပဲနော်။
တရုတျစကားကို စတငျလလေ့ာနကွေသူမြားအတှကျ အခွခေံအကဆြုံး နှုတျဆကျပုံလေးကို လလေ့ာထားပါနျော။
☞ ဇောငျzရှနျ့h(ငျ) ဟောငျ
☞ မင်ျဂလာ မနကျခငျးပါ။
☞ ဇောငျzရှနျ့h(ငျ) ဟောငျ နီး ဟောငျ မား
☞ မင်ျဂလာ မနကျခငျးပါ။ နငျ နကေောငျးလား။
☞ ဝျေါ ဟဲငျး ဟောငျ နီ နဲ
☞ ငါ နကေောငျးပါတယျ။ နငျရော။
☞ ဝေါ ယဲ ဟဲငျး ဟောငျ ရှဲ့ရှဲ့
☞ ငါလညျး နကေောငျးပါတယျ။ ကြေးဇူးပဲနျော။
စီးတယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
8:33 PM C-Sentence , Chinese
ကားစီးတာအပြင် စက်လှေကားစီးတာ၊ ဓာတ်လှေကား စီးတာတွေကိုပါ ပြောဆိုတတ်အောင် ဒီသင်ခန်းစာလေးကို လေ့ကျင့်ထားပါနော်။
☞ Zuò chē.
☞ ဇော့z ချဲh
☞ ကား စီးတယ်။
☞ Zuò diàntī.
☞ ဇော့z တျန့်ထီး
☞ ဓာတ်လှေကား စီးမယ်။
☞ Tā zuò chē qù le.
☞ ထား ဇော့z ချဲh ချွိ လဲာ့
☞ သူ ကားစီးပြီး သွားပြီ။
☞ Zuò zìdōngtī shàng lái.
☞ ဇော့z ဇစ်zတုံ့(င်)ထီး ရှန့်h(င်) လိုင်
☞ စက်လှေကားစီးပြီး လာတယ်။
☞Tā zuò zìdōngtī shàng sānlóu qù.
☞ ထား ဇော့z ဇစ်zတုံ့(င်)ထီး ရှန့်h(င်) စန်းလို ချွိ
☞ သူ စက်လှေကားစီးပြီး ၃ထပ်ကို တက်သွားတယ်။
☞ Wǒmen cóng zhèlǐ zuò diàntī shàng qù.
☞ ဝေါ်မဲင် ဆုံ(င်) ကျဲ့hလီ ဇော့z တျန့်ထီး ရှန့်h(င်) ချွိ
☞ ငါတို့ ဒီကနေ ဓာတ်လှေကားစီးပြီး တက်သွားမယ်။
☞ Wǒmen kěyǐ zuò zìdōngtī shàng lóu qù ma?
☞ ဝေါ်မဲင် ခဲယ်းယီ ဇော့z ဇစ်zတုံ့(င်)ထီး ရှန့်h(င်)လို ချွိ မား
☞ ငါတို့ စက်လှေကားစီးပြီး အပေါ်ထပ်ကို တက်လို့ရလား။
☞ Wǒ bù xiǎng zuò diàntī.
☞ ဝေါ် ပု ရှန်(င်) ဇော့z တျန့်ထီး
☞ ငါ ဓာတ်လှေကား မစီးချင်ဘူး။
☞ Nǐ wèishénme bú zuò diàntī ?
☞ နီ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပူ ဇော့z တျန့်ထီး
☞ နင် ဘာလို့ ဓာတ်လှေကား မစီးတာလဲ။
☞ Nǐ xiǎng zuò diàntī háishì zuò zìdōngtī?
☞ နီး ရှန်(င်) ဇော့z တျန့်ထီး ဟိုင်ရှစ်h ဇော့z ဇစ်zတုံ့(င်)ထီး
☞ နင် ဓာတ်လှေကား စီးချင်လား၊ စက်လှေကား စီးချင်လား။
စီးတယျ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောမလဲ။
ကားစီးတာအပွငျ စကျလှကေားစီးတာ၊ ဓာတျလှကေား စီးတာတှကေိုပါ ပွောဆိုတတျအောငျ ဒီသငျခနျးစာလေးကို လကေ့ငျြ့ထားပါနျော။
☞ ဇော့z ခြဲh
☞ ကား စီးတယျ။
☞ ဇော့z တနျြ့ထီး
☞ ဓာတျလှကေား စီးမယျ။
☞ ထား ဇော့z ခြဲh ခြှိ လဲာ့
☞ သူ ကားစီးပွီး သှားပွီ။
☞ ဇော့z ဇဈzတုံ့(ငျ)ထီး ရှနျ့h(ငျ) လိုငျ
☞ စကျလှကေားစီးပွီး လာတယျ။
☞ ထား ဇော့z ဇဈzတုံ့(ငျ)ထီး ရှနျ့h(ငျ) စနျးလို ခြှိ
☞ သူ စကျလှကေားစီးပွီး ၃ထပျကို တကျသှားတယျ။
☞ ဝျေါမဲငျ ဆုံ(ငျ) ကြဲ့hလီ ဇော့z တနျြ့ထီး ရှနျ့h(ငျ) ခြှိ
☞ ငါတို့ ဒီကနေ ဓာတျလှကေားစီးပွီး တကျသှားမယျ။
☞ ဝျေါမဲငျ ခဲယျးယီ ဇော့z ဇဈzတုံ့(ငျ)ထီး ရှနျ့h(ငျ)လို ခြှိ မား
☞ ငါတို့ စကျလှကေားစီးပွီး အပျေါထပျကို တကျလို့ရလား။
☞ ဝျေါ ပု ရှနျ(ငျ) ဇော့z တနျြ့ထီး
☞ ငါ ဓာတျလှကေား မစီးခငျြဘူး။
☞ နီ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပူ ဇော့z တနျြ့ထီး
☞ နငျ ဘာလို့ ဓာတျလှကေား မစီးတာလဲ။
☞ နီး ရှနျ(ငျ) ဇော့z တနျြ့ထီး ဟိုငျရှဈh ဇော့z ဇဈzတုံ့(ငျ)ထီး
☞ နငျ ဓာတျလှကေား စီးခငျြလား၊ စကျလှကေား စီးခငျြလား။
စီးသည် - စီး - စီးတယ် - စီးခြင်း - zuò - zuo4 - zuo - 坐
ပေးတယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
8:10 PM C-Sentence , Chinese
တစ်စုံတစ်ခု ပေးတယ်ဆိုတာကို ပြောတတ်အောင် နမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့ ကိုးကားပြောဆို လေ့ကျင့်ကြည့်နိုင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
☞ Wǒ gěi nǐ.
☞ ဝေါ် ကေး နီ
☞ ငါ နင့်ကို ပေးမယ်။
☞ Nǐ gěi wǒ.
☞ နီ ကေး ဝေါ်
☞ နင် ငါ့ကို ပေးပါ။
☞ Tā gěi nǐ shénme?
☞ ထား ကေး နီ ရှဲhမဲာ့
☞ သူ နင့်ကို ဘာပေးတာလဲ။
☞ Bàba zuótiān gěi wǒ shēngrì lǐwù.
☞ ပါ့ပါ ဇော်zထျန်း ကေး ဝေါ် ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r လီဝု
☞ အဖေ မနေ့က ငါ့ကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတယ်။
☞ Nǐ xiǎng gěi tā shénme?
☞ နီး ရှန်(င်) ကေ ထား ရှဲhမဲာ့
☞ နင် သူ့ကို ဘာပေးချင်တာလဲ။
☞ Nǐ míngtiān gěi tā shēngrì lǐwù ma?
☞ နီ မျင်(င်)ထျန်း ကေ ထား ရှဲင်းh(င်)ရွတ်r လီဝု မား
☞ နင် မနက်ဖြန် သူ့ကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးမှာလား။
☞ Wǒ yīnggāi gěi ma?
☞ ဝေါ် ယင်း(င်)ကိုင်း ကေ မား
☞ ငါ ပေးသင့်လား။
☞ Nǐ sòng gěi tā shénme lǐwù?
☞ နီ စုံ့(င်) ကေ ထား ရှဲhမဲာ့ လီဝု
☞ နင် သူ့ကို ဘာလက်ဆောင် ပို့ပေးတာလဲ။
☞ Shénme shíhou gěi wǒ gēge?
☞ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ကေး ဝေါ် ကဲယ်းကဲာ့
☞ ဘယ်တုန်းက ငါ့အစ်ကိုကို ပေးတာလဲ။
☞ Nǐ xǐhuan tā gěi de lǐwù ma?
☞ နီး ရှီဟွမ်း ထား ကေ တဲ့ လီဝု မား
☞ နင် သူပေးတဲ့လက်ဆောင်ကို သဘောကျလား။
ပေးတယျ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
တဈစုံတဈခု ပေးတယျဆိုတာကို ပွောတတျအောငျ နမူနာဝါကလြေးတှနေဲ့ ကိုးကားပွောဆို လကေ့ငျြ့ကွညျ့နိုငျစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
☞ ဝျေါ ကေး နီ
☞ ငါ နငျ့ကို ပေးမယျ။
☞ နီ ကေး ဝျေါ
☞ နငျ ငါ့ကို ပေးပါ။
☞ ထား ကေး နီ ရှဲhမဲာ့
☞ သူ နငျ့ကို ဘာပေးတာလဲ။
☞ ပါ့ပါ ဇျောzထနျြး ကေး ဝျေါ ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr လီဝု
☞ အဖေ မနကေ့ ငါ့ကို မှေးနလေ့ကျဆောငျပေးတယျ။
☞ နီး ရှနျ(ငျ) ကေ ထား ရှဲhမဲာ့
☞ နငျ သူ့ကို ဘာပေးခငျြတာလဲ။
☞ နီ မငျြ(ငျ)ထနျြး ကေ ထား ရှဲငျးh(ငျ)ရှတျr လီဝု မား
☞ နငျ မနကျဖွနျ သူ့ကို မှေးနလေ့ကျဆောငျပေးမှာလား။
☞ ဝျေါ ယငျး(ငျ)ကိုငျး ကေ မား
☞ ငါ ပေးသငျ့လား။
☞ နီ စုံ့(ငျ) ကေ ထား ရှဲhမဲာ့ လီဝု
☞ နငျ သူ့ကို ဘာလကျဆောငျ ပို့ပေးတာလဲ။
☞ ရှဲhမဲာ့ရှီhဟို့ ကေး ဝျေါ ကဲယျးကဲာ့
☞ ဘယျတုနျးက ငါ့အဈကိုကို ပေးတာလဲ။
☞ နီး ရှီဟှမျး ထား ကေ တဲ့ လီဝု မား
☞ နငျ သူပေးတဲ့လကျဆောငျကို သဘောကလြား။
ပေး - ပေးခြင်း - ပေးသည် - ပေးတယ် - ပေး - ပေးခွငျး - ပေးသညျ - ပေးတယျ - gei - gei3 - gěi - 给 - 給 - give - Give - GIVE
ကြိုက်တယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
4:19 AM C-Sentence , Chinese
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ အကြိုက်ချင်း မတူကြပါဘူး။ မိမိကြိုက်တာလေးတွေကို ကိုးကားဖော်ပြတတ်အောင် နမူနာဝါကျလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။
☞ Wǒ xǐhuan nǐ.
☞ ဝေါ ရှီဟွမ်း နီ
☞ ငါ နင့်ကို ကြိုက်တယ်။
☞ Nǐ xǐhuan wǒ ma?
☞ နီး ရှီဟွမ်း ဝေါ် မား
☞ နင် ငါ့ကို ကြိုက်လား။
☞ Tā xǐhuan shéi?
☞ ထား ရှီဟွမ်း ရှေh
☞ သူ ဘယ်သူ့ကို ကြိုက်တာလဲ။
☞ Nǐ bù xǐhuan ma?
☞ နီ ပုရှီဟွမ်း မား
☞ နင် မကြိုက်ဘူးလား။
☞ Tā wèishénme bù xǐhuan nǐ?
☞ ထား ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပုရှီဟွမ်း နီ
☞ သူ နင့်ကို ဘာလို့ မကြိုက်တာလဲ။
☞ Zhè shì bàba xǐhuan de cài.
☞ ကျဲ့h ရှစ်h ပါ့ပါ ရှီဟွမ်း တဲ့ ဆိုက်
☞ ဒါက အဖေကြိုက်တဲ့ဟင်း။
☞ Nǐ xǐhuan chǎofàn ma?
☞ နီး ရှီဟွမ်း ချောင်hဖန့်f မား
☞ နင် ထမင်းကြော် ကြိုက်လား။
☞ Māma bù xǐhuan zhūròu.
☞ မားမာ့ ပုရှီဟွမ်း ကျူးhရို့r
☞ အမေက ဝက်သားမကြိုက်ဘူး။
☞ Tā xǐhuan wǒ gěi de lǐwù.
☞ ထား ရှီဟွမ်း ဝေါကေတဲ့ လီဝု
☞ သူ ငါပေးတဲ့လက်ဆောင်ကို ကြိုက်တယ်။
☞ Wǒ bú tài xǐhuan chī hǎixiān chǎofàn.
☞ ဝေါ် ပူထိုက် ရှီဟွမ်း ချီးh ဟိုင်ရှမ်း ချောင်hဖန့်f
☞ ငါ ပင်လယ်စာထမင်းကြော်စားရတာ သိပ်မကြိုက်ဘူး။
ကွိုကျတယျ - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျကတော့ အကွိုကျခငျြး မတူကွပါဘူး။ မိမိကွိုကျတာလေးတှကေို ကိုးကားဖျောပွတတျအောငျ နမူနာဝါကလြေးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ပါ။
☞ ဝေါ ရှီဟှမျး နီ
☞ ငါ နငျ့ကို ကွိုကျတယျ။
☞ နီး ရှီဟှမျး ဝျေါ မား
☞ နငျ ငါ့ကို ကွိုကျလား။
☞ ထား ရှီဟှမျး ရှေh
☞ သူ ဘယျသူ့ကို ကွိုကျတာလဲ။
☞ နီ ပုရှီဟှမျး မား
☞ နငျ မကွိုကျဘူးလား။
☞ ထား ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပုရှီဟှမျး နီ
☞ သူ နငျ့ကို ဘာလို့ မကွိုကျတာလဲ။
☞ ကြဲ့h ရှဈh ပါ့ပါ ရှီဟှမျး တဲ့ ဆိုကျ
☞ ဒါက အဖကွေိုကျတဲ့ဟငျး။
☞ နီး ရှီဟှမျး ခြောငျhဖနျ့f မား
☞ နငျ ထမငျးကွျော ကွိုကျလား။
☞ မားမာ့ ပုရှီဟှမျး ကြူးhရို့r
☞ အမကေ ဝကျသားမကွိုကျဘူး။
☞ ထား ရှီဟှမျး ဝေါကတေဲ့ လီဝု
☞ သူ ငါပေးတဲ့လကျဆောငျကို ကွိုကျတယျ။
☞ ဝျေါ ပူထိုကျ ရှီဟှမျး ခြီးh ဟိုငျရှမျး ခြောငျhဖနျ့f
☞ ငါ ပငျလယျစာထမငျးကွျောစားရတာ သိပျမကွိုကျဘူး။
ကြိုက် - ကြိုက် - ကြိုက်တယ် - ကြိုက်တယ် - ကြိုက်သည် - ကြိုက်သည် - ကြိုက်ခြင်း - ကြိုက်ခြင်း - နှစ်သက်တယ် - နှစ်သက်သည် - နှစ်သက် - သဘာကျ - သဘောကျသည် - သဘောကျခြင်း - ကွိုကျ - ကွိုကျ - ကွိုကျတယျ - ကွိုကျတယျ - ကွိုကျသညျ - ကွိုကျသညျ - ကွိုကျခွငျး - ကွိုကျခွငျး - နှဈသကျတယျ - နှဈသကျသညျ - နှဈသကျ - သဘာကြ - သဘောကသြညျ - သဘောကခြွငျး - xihuan - xi huan - xi3 huan5 - xǐ huan - 喜欢 - like - LIKE - Like
အင်္ကျီဆိုင် ဘယ်နားမှာ ရှိလဲ။
8:55 AM C-Dialogue , Chinese
နေရာတစ်ခုကို မေးမြန်းပုံ၊ လမ်းညွှန်ပုံတွေကို ပြောဆိုတတ်စေဖို့ ဒီသင်ခန်းစာလေးက သင့်ကို ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာကြည့်ပါနော်။
☞ Qǐng wèn, zhèlǐ yǒu yīfu mài ma?
☞ ချင်(င်)ဝဲင့် ကျဲ့hလီယို ယီးဖုf မိုက် မား
☞ တဆိတ်လောက်၊ ဒီမှာ အင်္ကျီရောင်းပါသလား။
☞ Méiyǒu, wǒmen zhèlǐ zhǐ yǒu wénjù.
☞ မေးယို ဝေါ်မဲင် ကျဲ့hလီ ကျီးhယို ဝဲင်ကျွိ
☞ မရောင်းပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စာရေးကိရိယာပဲ ရောင်းတာပါ။
☞ Nǎlǐ yǒu fúzhuāngdiàn ne?
☞ နားလီယို ဖူfကျွမ်းh(င်)တျန့် နဲ
☞ ဘယ်နားမှာ အဝတ်အစားဆိုင် ရှိသလဲ။
☞ Lùkǒu, zuǒ zhuǎn, zhí zǒu yì gōnglǐ, zài yòu zhuǎn, zhí zǒu yì gōnglǐ, jiù dào le.
☞ လုခို ဇောzကျွမ်h ကျီးhဇိုz ယိကုံး(င်)လီ ဇိုက်zယို့ကျွမ်h ကျီးhဇိုz ယိကုံး(င်)လီ ကျို့တောက်လဲာ့
☞ ရှေ့လမ်းဆုံမှာ ဘယ်ကွေ့၊ တည့်တည့် မီတာတစ်ထောင်လျှောက်၊ ညာထပ်ကွေ့၊ တည့်တည့် မီတာတစ်ထောင်လျှောက်၊ အဲ့ဒါဆို ရောက်ပါပြီ။
☞ Nàme yuǎn! Fùjìn méiyǒu ma?
☞ နာ့မဲာ့ယွမ် ဖုfကျင့် မေးယို မား
☞ ဝေးလိုက်တာ၊ နီးနီးနားနားမှာ မရှိဘူးလား။
☞ Pángbiān jiù yǒu yì jiā fúzhuāngdiàn.
☞ ဖန်(င်)ပြန်း ကျို့ယို ယိကျား ဖူfကျွမ်းh(င်)တျန့်
☞ ဘေးဘက်မှာတော့ အဝတ်အစားဆိုင် တစ်ဆိုင်တော့ ရှိပါတယ်။
☞ Ò, kàn dào le, kàn dào le. Xièxie nǐ o, wǒ qù mǎi yīfu, bàibài.
☞ အော့ ခန့်တောက်လဲာ့ ခန့်တောက်လဲာ့ ရှဲ့ရှဲ့နီအော ဝေါ်ချွိ မိုင်ယီးဖုf ပိုက်ပိုက်
☞ အော်၊ တွေ့ပြီ၊ တွေ့ပြီ။ ကျေးဇူးပဲနော်၊ ကျွန်တော် အင်္ကျီ သွားဝယ်လိုက်အုံးမယ်၊ ဘိုင့်ဘိုင်။
အကငြ်္ီဆိုငျ ဘယျနားမှာ ရှိလဲ။
နရောတဈခုကို မေးမွနျးပုံ၊ လမျးညှနျပုံတှကေို ပွောဆိုတတျစဖေို့ ဒီသငျခနျးစာလေးက သငျ့ကို ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ လလေ့ာကွညျ့ပါနျော။
☞ ခငျြ(ငျ)ဝဲငျ့ ကြဲ့hလီယို ယီးဖုf မိုကျ မား
☞ တဆိတျလောကျ၊ ဒီမှာ အကငြ်္ီရောငျးပါသလား။
☞ မေးယို ဝျေါမဲငျ ကြဲ့hလီ ကြီးhယို ဝဲငျကြှိ
☞ မရောငျးပါဘူး၊ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ စာရေးကိရိယာပဲ ရောငျးတာပါ။
☞ နားလီယို ဖူfကြှမျးh(ငျ)တနျြ့ နဲ
☞ ဘယျနားမှာ အဝတျအစားဆိုငျ ရှိသလဲ။
☞ လုခို ဇောzကြှမျh ကြီးhဇိုz ယိကုံး(ငျ)လီ ဇိုကျzယို့ကြှမျh ကြီးhဇိုz ယိကုံး(ငျ)လီ ကြို့တောကျလဲာ့
☞ ရှလေ့မျးဆုံမှာ ဘယျကှေ့၊ တညျ့တညျ့ မီတာတဈထောငျလြှောကျ၊ ညာထပျကှေ့၊ တညျ့တညျ့ မီတာတဈထောငျလြှောကျ၊ အဲ့ဒါဆို ရောကျပါပွီ။
☞ နာ့မဲာ့ယှမျ ဖုfကငျြ့ မေးယို မား
☞ ဝေးလိုကျတာ၊ နီးနီးနားနားမှာ မရှိဘူးလား။
☞ ဖနျ(ငျ)ပွနျး ကြို့ယို ယိကြား ဖူfကြှမျးh(ငျ)တနျြ့
☞ ဘေးဘကျမှာတော့ အဝတျအစားဆိုငျ တဈဆိုငျတော့ ရှိပါတယျ။
☞ အော့ ခနျ့တောကျလဲာ့ ခနျ့တောကျလဲာ့ ရှဲ့ရှဲ့နီအော ဝျေါခြှိ မိုငျယီးဖုf ပိုကျပိုကျ
☞ အျော၊ တှပွေီ့၊ တှပွေီ့။ ကြေးဇူးပဲနျော၊ ကြှနျတျော အကငြ်္ီ သှားဝယျလိုကျအုံးမယျ၊ ဘိုငျ့ဘိုငျ။
8:51 AM C-Dialogue , Chinese
ဈေးဝယ်တဲ့အခါ ဆိုင်ရှင်က ဈေးနှုန်းမှားတွက်မိပြီး ပိုက်ဆံပိုတောင်းမိတာကို ပြန်လည်ရှင်းပြတတ်အောင် ဒီသင်ခန်းစာလေးကို လေ့လာထားနိုင်ပါတယ်။
☞ Nǐ hǎo! Nǐ xiǎng mǎi shénme?
☞ နီးဟောင် နီးရှန်း(င်)မိုင် ရှဲhမဲာ့
☞ မင်္ဂလာပါ။ ခင်ဗျား ဘာဝယ်ချင်လို့လဲ။
☞ Wǒ mǎi yì bāo yān.
☞ ဝေါမိုင် ယိပေါင်းယန်း
☞ ကျွန်တော် ဆေးလိပ်တစ်ဗူး ဝယ်မလို့ပါ။
☞ Shénme páizi de yān?
☞ ရှဲhမဲာ့ဖိုင်ဇစ်z တဲ့ ယန်း
☞ ဘာတံဆိပ် ဆေးလိပ်လဲ။
☞ Yì bāo wànbǎolù.
☞ ယိပေါင်း ဝမ့်ပေါင်လု
☞ မာဘိုရို (Marlboro) တစ်ဗူးပါ။
☞ Hái yào bié de ma?
☞ ဟိုင်ယောက် ပြယ်တဲ့ မား
☞ တခြားဟာ ယူအုံးမလား
☞ Zài mǎi liǎng ge dǎhuǒjī.
☞ ဇိုက်zမိုင် လျန်(င်)ကဲာ့ တားဟော်ကျီး
☞ ဂက်စ်မီးခြစ်နှစ်လုံး ယူမယ်။
☞ Yígòng yí wàn miǎnbì.
☞ ယီကုံ့(င်) ယီဝမ့် မြန်ပိ
☞ စုစုပေါင်း မြန်မာငွေ တစ်သောင်းပါ။
☞ Shénme! Zhème guì? Wànbǎolù yì bāo sānqiān, dǎhuǒjī liǎng ge sānbǎi. Zěnme yào yí wàn?
☞ ရှဲhမဲာ့ ကျဲ့hမဲာ့ကွေ့ ဝမ့်ပေါင်လု ယိပေါင်း စန်းချန်း တားဟော်ကျီး လျန်(င်)ကဲာ့ စန်းပိုင် ဇဲင်zမဲာ့ယောက် ယီဝမ့်
☞ ဟမ်။ ဈေးများလှချည်လား။ မာဘိုရိုတစ်ဗူးက သုံးထောင်၊ မီးခြစ်နှစ်လုံးက သုံးရာ။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး တစ်သောင်းတောင်းတာလဲ။
☞ Ò! Shì de, shì de. Duìbuqǐ, wǒ suàn cuò le, yīnggāi shì sānqiān sān.
☞ အော့ ရှစ်hတဲ့ ရှစ်hတဲ့ တွေ့ပုချီ ဝေါ်စွမ့်ဆော့လဲာ့ ယင်း(င်)ကိုင်းရှစ်h စန်းချန်းစန်း
☞ အော်။ ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်။ ဆောရီးနော်၊ ကျွန်တော် တွက်တာ မှားသွားတယ်၊ သုံးထောင့်သုံးရာပဲ ဖြစ်ရမှာ။
ဈေးဝယျတဲ့အခါ ဆိုငျရှငျက ဈေးနှုနျးမှားတှကျမိပွီး ပိုကျဆံပိုတောငျးမိတာကို ပွနျလညျရှငျးပွတတျအောငျ ဒီသငျခနျးစာလေးကို လလေ့ာထားနိုငျပါတယျ။
☞ နီးဟောငျ နီးရှနျး(ငျ)မိုငျ ရှဲhမဲာ့
☞ မင်ျဂလာပါ။ ခငျဗြား ဘာဝယျခငျြလို့လဲ။
☞ ဝေါမိုငျ ယိပေါငျးယနျး
☞ ကြှနျတျော ဆေးလိပျတဈဗူး ဝယျမလို့ပါ။
☞ ရှဲhမဲာ့ဖိုငျဇဈz တဲ့ ယနျး
☞ ဘာတံဆိပျ ဆေးလိပျလဲ။
☞ ယိပေါငျး ဝမျ့ပေါငျလု
☞ မာဘိုရို (Marlboro) တဈဗူးပါ။
☞ ဟိုငျယောကျ ပွယျတဲ့ မား
☞ တခွားဟာ ယူအုံးမလား
☞ ဇိုကျzမိုငျ လနျြ(ငျ)ကဲာ့ တားဟျောကြီး
☞ ဂကျဈမီးခွဈနှဈလုံး ယူမယျ။
☞ ယီကုံ့(ငျ) ယီဝမျ့ မွနျပိ
☞ စုစုပေါငျး မွနျမာငှေ တဈသောငျးပါ။
☞ ရှဲhမဲာ့ ကြဲ့hမဲာ့ကှေ့ ဝမျ့ပေါငျလု ယိပေါငျး စနျးခနျြး တားဟျောကြီး လနျြ(ငျ)ကဲာ့ စနျးပိုငျ ဇဲငျzမဲာ့ယောကျ ယီဝမျ့
☞ ဟမျ။ ဈေးမြားလှခညျြလား။ မာဘိုရိုတဈဗူးက သုံးထောငျ၊ မီးခွဈနှဈလုံးက သုံးရာ။ ဘယျလိုဖွဈပွီး တဈသောငျးတောငျးတာလဲ။
☞ အော့ ရှဈhတဲ့ ရှဈhတဲ့ တှပေု့ခြီ ဝျေါစှမျ့ဆော့လဲာ့ ယငျး(ငျ)ကိုငျးရှဈh စနျးခနျြးစနျး
☞ အျော။ ဟုတျတယျ၊ ဟုတျတယျ။ ဆောရီးနျော၊ ကြှနျတျော တှကျတာ မှားသှားတယျ၊ သုံးထောငျ့သုံးရာပဲ ဖွဈရမှာ။
12:03 AM C-Dialogue , Chinese
မိမိ ဘယ်ရက်နားတယ်ဆိုတာကို ပြောဆိုတတ်စေဖို့ လေ့ကျင့်ကြရမယ့် စကားပြောသင်ခန်းစာလေးပါ။
☞ Míngtiān fàngjià.
☞ မျင်(င်)ထျန်း ဖန့်f(င်)ကျာ့
☞ မနက်ဖြန် နားရက်ပါ။
☞ Wèishénme ne?
☞ Yīnwèi míngtiān shì yuándàn.
☞ ယင်းဝေ့ မျင်(င်)ထျန်း ရှစ်h ယွမ်တန့်
☞ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မနက်ဖြန် နှစ်ကူးရက်လေ။
☞ Fàng jǐ tiān jià?
☞ ဖန့်f(င်) ကျီထျန်း ကျာ့
☞ Fàng liǎng tiān jià.
☞ ဖန့်f(င်) လျန်(င်)ထျန်း ကျာ့
☞ နှစ်ရက် နားမှာပါ။
မိမိ ဘယျရကျနားတယျဆိုတာကို ပွောဆိုတတျစဖေို့ လကေ့ငျြ့ကွရမယျ့ စကားပွောသငျခနျးစာလေးပါ။
☞ မငျြ(ငျ)ထနျြး ဖနျ့f(ငျ)ကြာ့
☞ မနကျဖွနျ နားရကျပါ။
☞ ယငျးဝေ့ မငျြ(ငျ)ထနျြး ရှဈh ယှမျတနျ့
☞ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ မနကျဖွနျ နှဈကူးရကျလေ။
☞ ဖနျ့f(ငျ) ကြီထနျြး ကြာ့
☞ ဖနျ့f(ငျ) လနျြ(ငျ)ထနျြး ကြာ့
☞ နှဈရကျ နားမှာပါ။
11:58 PM C-Dialogue , Chinese
မိမိနေမကောင်းတဲ့ အကြောင်းကို တရုတ်လို ပြောဆိုတဲ့ စကားပြောပုံစံလေးကို လေ့ကျင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
☞ Nǐ zěnme le?
☞ နီး ဇဲင်zမဲာ့လဲာ့
☞ မင်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။
☞ Wǒ gǎnmào le.
☞ ဝေါ ကန်မောက်လဲာ့
☞ ငါ အအေးမိသွားတယ်။
☞ Kàn yīshēng le ma?
☞ Kàn le. Yīshēng yào wǒ duō xiūxi.
☞ ခန့်လဲာ့ ယီးရှဲင်းh(င်) ယောက်ဝေါ် တောရှိုးရှိ
☞ ပြပြီးပါပြီ။ ဆရာဝန်က ကျွန်တော့ကို များများ အနားယူခိုင်းပါတယ်။
မိမိနမေကောငျးတဲ့ အကွောငျးကို တရုတျလို ပွောဆိုတဲ့ စကားပွောပုံစံလေးကို လကေ့ငျြ့ထားနိုငျပါတယျ။
☞ နီး ဇဲငျzမဲာ့လဲာ့
☞ မငျး ဘယျလိုဖွဈတာလဲ။
☞ ဝေါ ကနျမောကျလဲာ့
☞ ငါ အအေးမိသှားတယျ။
☞ ခနျ့လဲာ့ ယီးရှဲငျးh(ငျ) ယောကျဝျေါ တောရှိုးရှိ
☞ ပွပွီးပါပွီ။ ဆရာဝနျက ကြှနျတော့ကို မြားမြား အနားယူခိုငျးပါတယျ
11:54 PM C-Dialogue , Chinese
မိမိ မလုပ်တတ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုကို သူငယ်ချင်းကို ကူလုပ်ပေးဖို့အတွက် အကူအညီတောင်းတဲ့ စကားပြောပုံစံလေးပါ။
☞ ခင်ဗျား ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။
☞ Wǒ bù zhīdào zhè jiàn shì zěnme bàn.
☞ ဝေါ် ပုကျီးhတောက် ကျဲ့hကျန့်ရှစ်h ဇဲင်zမဲာ့ပန့်
☞ ဒီကိစ္စ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျွန်တော် မသိဘူးဗျ။
☞ Nà zěnme bàn?
☞ နာ့ ဇဲင်zမဲာ့ပန့်
☞ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
☞ Wǒ xiǎng qǐng nǐ bāng wǒ bàn.
☞ ဝေါရှန်(င်)ချင်း(င်)နီ ပန်း(င်)ဝေါ်ပန့်
☞ ကျွန်တော့်ကို ကူလုပ်ပေးပါလို့ ခင်ဗျားဆီက အကူအညီ တောင်းချင်ပါတယ်။
မိမိ မလုပျတတျတဲ့ ကိစ်စတဈခုခုကို သူငယျခငျြးကို ကူလုပျပေးဖို့အတှကျ အကူအညီတောငျးတဲ့ စကားပွောပုံစံလေးပါ။
☞ ခငျဗြား ဘယျလိုဖွဈတာလဲ။
☞ ဝျေါ ပုကြီးhတောကျ ကြဲ့hကနျြ့ရှဈh ဇဲငျzမဲာ့ပနျ့
☞ ဒီကိစ်စ ဘယျလိုလုပျရမလဲ ကြှနျတျော မသိဘူးဗြ။
☞ နာ့ ဇဲငျzမဲာ့ပနျ့
☞ ဒါဆို ဘယျလိုလုပျမလဲ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ခငျြး(ငျ)နီ ပနျး(ငျ)ဝျေါပနျ့
☞ ကြှနျတေျာ့ကို ကူလုပျပေးပါလို့ ခငျဗြားဆီက အကူအညီ တောငျးခငျြပါတယျ။
10:27 PM C-Dialogue , Chinese
တခါတလေမှာ သမီးရည်းစားချင်း အခန့်မသင့်လို့ စိတ်ကောက်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာ ပြောရမယ့် စကားပြောပုံစံလေးပေါ့နော်။
☞ Wǒ nǚ péngyǒu bù lǐ wǒ le.
☞ ဝေါနွီဖဲင်း(င်)ယို ပုလီးဝေါ်လဲာ့
☞ ငါ့ရည်းစားက ငါ့ကို အရေးမလုပ်လို့ပါ။
☞ Wǒ yě bù zhīdào zěnme bàn.
☞ ဝေါယယ် ပုကျီးhတောက် ဇဲင်zမဲာ့ပန့်
☞ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ငါလည်း မသိဘူး။
တခါတလမှော သမီးရညျးစားခငျြး အခနျ့မသငျ့လို့ စိတျကောကျနတေဲ့ အခိုကျအတနျ့လေးမှာ ပွောရမယျ့ စကားပွောပုံစံလေးပေါ့နျော။
☞ ဝေါနှီဖဲငျး(ငျ)ယို ပုလီးဝျေါလဲာ့
☞ ငါ့ရညျးစားက ငါ့ကို အရေးမလုပျလို့ပါ။
☞ ဝေါယယျ ပုကြီးhတောကျ ဇဲငျzမဲာ့ပနျ့
☞ ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတာ ငါလညျး မသိဘူး။
ဓာတ်လှေကား - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
9:48 PM C-Word , Chinese
အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးတွေမှာ အတက်အဆင်း လွယ်ကူစေဖို့အတွက် ဓာတ်လှေကားတွေကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
电梯 diàn tī
ငါတို့ ဓာတ်လှေကားနဲ့ တက်ကြတာပေါ့။
Wǒmen zuò diàntī shàng qù ba.
ဝေါ်မဲင် ဇော့z တျန့်ထီး ရှန့်h(င်)ချွိ ပါ့
坐电梯 zuò diàn tī
货物电梯 huò wù diàn tī
电动扶梯 diàn dòng fú tī
自动梯 zì dòng tī
手扶梯 shǒu fú tī
楼梯 lóu tī
竹梯子 zhú tī zi
A ပုံစံ ခွထောက်လှေကား
人字梯 rén zì tī
螺旋梯 luó xuán tī
အထပ်မြင့်တိုက်များ၏ နောက်ဖေးရှိ အရေးပေါ်လှေကား
消防梯 xiāo fáng tī
伸缩梯 shēn suō tī
ဓာတျလှကေား - တရုတျလို ဘယျလိုပွောလဲ။
အထပျမွငျ့ အဆောကျအဦးတှမှော အတကျအဆငျး လှယျကူစဖေို့အတှကျ ဓာတျလှကေားတှကေို ထညျ့သှငျးတပျဆငျလရှေိ့ကွပါတယျ။
ငါတို့ ဓာတျလှကေားနဲ့ တကျကွတာပေါ့။
ဝျေါမဲငျ ဇော့z တနျြ့ထီး ရှနျ့h(ငျ)ခြှိ ပါ့
A ပုံစံ ခှထောကျလှကေား
အထပျမွငျ့တိုကျမြား၏ နောကျဖေးရှိ အရေးပျေါလှကေား
လှေကား - လှေခါး - လှကေား - လှခေါး
9:38 PM C-Dialogue , Chinese
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာတော့ မိမိလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အပြင်ထွက်ဝယ်စရာမလိုဘဲ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။
☞ Xiǎo Lè, nǐ qù nǎr?
☞ ရှောင်လဲာ့ နီချွိနာr
☞ ရှောင်လဲ့၊ မင်း ဘယ်သွားမလို့လဲ။
☞ Wǒ qù shāngdiàn mǎi yí ge ěrjī. Wǒ de jiù ěrjī huài le.
☞ ဝေါ်ချွိ ရှန်းh(င်)တျန့် မိုင်ယီကဲာ့အဲယ်rကျီး ဝေါ်တဲ့ ကျို့အဲယ်rကျီး ဟွိုက်လဲာ့
☞ ငါ ကုန်တိုက်သွားပြီး၊ နားကြပ်တစ်ခု ဝယ်မလို့။ ငါ့ရဲ့ နားကြပ်အဟောင်းက ပျက်နေပြီ။
☞ Wàimiàn tài èr le, nǐ yào bú yào zài wǎng shang mǎi ěrjī, jiù bú yòng chūmén le.
☞ ဝိုက်မြန့် ထိုက်ရဲ့rလဲာ့ နီယောက်ပူယောက် ဇိုက်zဝမ်(င်)ရှန့်h(င်) မိုင်းအဲယ်rကျီး ကျို့ပူယုံ့(င်) ချူးhမဲင်လဲာ့
☞ အပြင်မှာ အရမ်းပူတယ်၊ မင်း အွန်လိုင်းကနေ နားကြပ် မဝယ်ချင်ဘူးလား၊ ဒါဆို အပြင်ထွက်ဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
☞ Dànshì wǒ bù zhīdào tāmen de ěrjī zěnmeyàng?
☞ တန့်ရှစ်h ဝေါ်ပုကျီးhတောက် ထားမဲင်တဲ့ အဲယ်rကျီး ဇဲင်zမဲာ့ယန့်(င်)
☞ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ နားကြပ်က ဘယ်လိုလဲဆိုတာ ငါ မသိဘူးလေ။
☞ Méi guānxi, wǒ zhīdào yí ge hěn hǎo de wǎngdiàn. Nǐ bù xǐhuan hái kěyǐ tuìhuò.
☞ မေကွမ်းရှိ ဝေါ်ကျီးhတောက် ယီကဲာ့ ဟဲင်းဟောင်တဲ့ ဝမ်(င်)တျန့် နီပုရှီဟွမ်း ဟိုင်ခဲယ်းယီ ထွေ့ဟွမ့်
☞ ကိစ္စမရှိဘူး၊ သိပ်ကောင်းတဲ့ အွန်လိုင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ငါသိတယ်။ မင်း မကြိုက်ရင် ပြန်လဲလို့ ရသေးတယ်။
☞ Hǎo, nǐ kěyǐ bǎ liànjiē fā gěi wǒ ma? Wǒ zài wǎng shang mǎi.
☞ ဟောင် နီ ခဲယ်းယီ ပါလျန့်ကျဲ ဖားfကေးဝေါ်မား ဝေါ် ဇိုက်zဝမ်(င်)ရှန့်h(င်) မိုင်
☞ ကောင်းပါပြီ၊ မင်း ငါ့ကို Link ပို့ပေးလို့ရမလား။ ငါ အွန်လိုင်းပေါ်က ဝယ်လိုက်မယ်လေ။
ဒီနခေ့တျေကွီးမှာတော့ မိမိလိုခငျြတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို အပွငျထှကျဝယျစရာမလိုဘဲ အှနျလိုငျးပျေါကနေ အလှယျတကူ ဝယျလို့ရနပေါပွီ။
☞ ရှောငျလဲာ့ နီခြှိနာr
☞ ရှောငျလဲ့၊ မငျး ဘယျသှားမလို့လဲ။
☞ ဝျေါခြှိ ရှနျးh(ငျ)တနျြ့ မိုငျယီကဲာ့အဲယျrကြီး ဝျေါတဲ့ ကြို့အဲယျrကြီး ဟှိုကျလဲာ့
☞ ငါ ကုနျတိုကျသှားပွီး၊ နားကွပျတဈခု ဝယျမလို့။ ငါ့ရဲ့ နားကွပျအဟောငျးက ပကျြနပွေီ။
☞ ဝိုကျမွနျ့ ထိုကျရဲ့rလဲာ့ နီယောကျပူယောကျ ဇိုကျzဝမျ(ငျ)ရှနျ့h(ငျ) မိုငျးအဲယျrကြီး ကြို့ပူယုံ့(ငျ) ခြူးhမဲငျလဲာ့
☞ အပွငျမှာ အရမျးပူတယျ၊ မငျး အှနျလိုငျးကနေ နားကွပျ မဝယျခငျြဘူးလား၊ ဒါဆို အပွငျထှကျဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
☞ တနျ့ရှဈh ဝျေါပုကြီးhတောကျ ထားမဲငျတဲ့ အဲယျrကြီး ဇဲငျzမဲာ့ယနျ့(ငျ)
☞ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ နားကွပျက ဘယျလိုလဲဆိုတာ ငါ မသိဘူးလေ။
☞ မကှေမျးရှိ ဝျေါကြီးhတောကျ ယီကဲာ့ ဟဲငျးဟောငျတဲ့ ဝမျ(ငျ)တနျြ့ နီပုရှီဟှမျး ဟိုငျခဲယျးယီ ထှဟှေ့မျ့
☞ ကိစ်စမရှိဘူး၊ သိပျကောငျးတဲ့ အှနျလိုငျးဆိုငျတဈဆိုငျကို ငါသိတယျ။ မငျး မကွိုကျရငျ ပွနျလဲလို့ ရသေးတယျ။
☞ ဟောငျ နီ ခဲယျးယီ ပါလနျြ့ကြဲ ဖားfကေးဝျေါမား ဝျေါ ဇိုကျzဝမျ(ငျ)ရှနျ့h(ငျ) မိုငျ
☞ ကောငျးပါပွီ၊ မငျး ငါ့ကို Link ပို့ပေးလို့ရမလား။ ငါ အှနျလိုငျးပျေါက ဝယျလိုကျမယျလေ။
8:01 AM C-Dialogue , Chinese
တစ်ခုခုသောက်တဲ့အကြောင်းကို ပြောဆိုတတ်အောင် နမူနာဝါကျလေးတွေနဲ့ ကိုးကားလေ့လာကြည့်ကြပါ။
☞ Wǒ xiǎng hē kāfēi.
☞ ဝေါရှန်(င်) ဟဲယ်းခါးဖေးf
☞ ငါ ကော်ဖီ သောက်ချင်တယ်။
☞ Wǒ xiǎng hē shuǐ.
☞ ဝေါရှန်(င်) ဟဲယ်းရွှေh
☞ ငါ ရေ သောက်ချင်တယ်။
☞ Hē duō le.
☞ အများကြီး သောက်လိုက်ပြီ။
☞ Wǒ hē zuì le.
☞ ငါ မူးသွားပြီ။
☞ Qǐng hē chá.
☞ ကျေးဇူးပြုပြီး လက်ဖက်ရည် သောက်ပါ။
☞ Nǐ xiǎng hē shénme?
☞ နီးရှန်(င်) ဟဲယ်းရှဲhမဲာ့
☞ မင်း ဘာသောက်ချင်တာလဲ
☞ Nǐ yào hē tāng ma?
☞ နီယောက် ဟဲယ်းထန်း(င်) မား
☞ မင်း စွပ်ပြုတ် သောက်မလား။
☞ Wǒ bú huì hē jiǔ.
☞ ဝေါ် ပူဟွေ့ဟဲယ်းကျို
☞ ငါ အရက် မသောက်တတ်ဘူး။
☞ Duō hē yìdiǎnr ba.
☞ နည်းနည်း ပိုသောက်လိုက်ပါ။
☞ Bié zài hē le.
☞ ပြယ် ဇိုက်zဟဲယ်းလဲာ့
☞ ထပ် မသောက်နဲ့တော့။
တဈခုခုသောကျတဲ့အကွောငျးကို ပွောဆိုတတျအောငျ နမူနာဝါကလြေးတှနေဲ့ ကိုးကားလလေ့ာကွညျ့ကွပါ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ) ဟဲယျးခါးဖေးf
☞ ငါ ကျောဖီ သောကျခငျြတယျ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ) ဟဲယျးရှေh
☞ ငါ ရေ သောကျခငျြတယျ။
☞ အမြားကွီး သောကျလိုကျပွီ။
☞ ငါ မူးသှားပွီ။
☞ ကြေးဇူးပွုပွီး လကျဖကျရညျ သောကျပါ။
☞ နီးရှနျ(ငျ) ဟဲယျးရှဲhမဲာ့
☞ မငျး ဘာသောကျခငျြတာလဲ
☞ နီယောကျ ဟဲယျးထနျး(ငျ) မား
☞ မငျး စှပျပွုတျ သောကျမလား။
☞ ဝျေါ ပူဟှဟေဲ့ယျးကြို
☞ ငါ အရကျ မသောကျတတျဘူး။
☞ နညျးနညျး ပိုသောကျလိုကျပါ။
☞ ပွယျ ဇိုကျzဟဲယျးလဲာ့
☞ ထပျ မသောကျနဲ့တော့။
သောက် - သောက်ခြင်း - သောက်သည် - သောက်တယ် -သောကျ - သောကျခွငျး - သောကျသညျ - သောကျတယျ - he - he1 - hē - 喝 - drink - Drink
7:40 AM C-Dialogue , Chinese
တခါတလေမှာ ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘဲ ပျင်းနေလို့ ဟိုဒီလျှောက်သွားပြီး ငေးရင်းကြည့်ရင်း အချိန်ဖြုန်းတာပေါ့။
☞ Nǐ yòu qù guàngjiē le.
☞ နီ ယို့ ချွိကွမ့်(င်)ကျဲ လဲာ့
☞ မင်း ဟိုဒီလျှောက်ပတ်ပြန်ပြီ။
☞ Méi shì ma!
☞ အလုပ်ကိစ္စမှ မရှိတာ။
☞ Wèishénme bú qù yùndòng?
☞ ဝေ့ရှဲhမဲာ့ ပူချွိ ယွင့်တုံ့(င်)
☞ ဘာလို့ အားကစား သွားမလုပ်တာလဲ။
☞ Yùndòng tài wúliáo le.
☞ ယွင့်တုံ့(င်) ထိုက်ဝူးလျောင် လဲာ့
☞ အားကစားလုပ်ရတာ ပျင်းစရာကောင်းလွန်းတယ်။
တခါတလမှော ဘာမှလုပျစရာမရှိဘဲ ပငျြးနလေို့ ဟိုဒီလြှောကျသှားပွီး ငေးရငျးကွညျ့ရငျး အခြိနျဖွုနျးတာပေါ့။
☞ နီ ယို့ ခြှိကှမျ့(ငျ)ကြဲ လဲာ့
☞ မငျး ဟိုဒီလြှောကျပတျပွနျပွီ။
☞ အလုပျကိစ်စမှ မရှိတာ။
☞ ဝရှေဲ့hမဲာ့ ပူခြှိ ယှငျ့တုံ့(ငျ)
☞ ဘာလို့ အားကစား သှားမလုပျတာလဲ။
☞ ယှငျ့တုံ့(ငျ) ထိုကျဝူးလြောငျ လဲာ့
☞ အားကစားလုပျရတာ ပငျြးစရာကောငျးလှနျးတယျ။
အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်စရာ ထွေထွေထူးထူးမရှိဘဲ ပျင်းနေတော့ တီဗီလေးဖွင့်ပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့။
☞ Nǐ yòu kàn diànshì le.
☞ နီ ယို့ ခန့်တျန့်ရှစ်h လဲာ့
☞ မင်း တီဗီကြည့်ပြန်ပြီ။
☞ Wèishénme bú kàn shū ne?
☞ ဝေ့ရှဲhမာ့ ပူခန့်ရှူးh နဲ
☞ ဘာလို့ စာမကြည့်တာလဲ။
☞ Kàn shū tài lèi le.
☞ ခန့်ရှူးh ထိုက်လေ့လဲာ့
☞ စာကြည့်ရတာ အရမ်း ပင်ပန်းပါတယ်။
အိမျမှာ အလုပျလုပျစရာ ထှထှေထေူးထူးမရှိဘဲ ပငျြးနတေော့ တီဗီလေးဖှငျ့ပွီး ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့ပေါ့။
☞ နီ ယို့ ခနျ့တနျြ့ရှဈh လဲာ့
☞ မငျး တီဗီကွညျ့ပွနျပွီ။
☞ ဝရှေဲ့hမာ့ ပူခနျ့ရှူးh နဲ
☞ ဘာလို့ စာမကွညျ့တာလဲ။
☞ ခနျ့ရှူးh ထိုကျလလေဲ့ာ့
☞ စာကွညျ့ရတာ အရမျး ပငျပနျးပါတယျ။
7:17 AM C-Dialogue , Chinese
မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်စတာတွေကို ပြောဆိုတတ်အောင် ဒီသင်ခန်းစာလေးကို လေ့ကျင့်ထားပါ။
☞ Xiǎoxué bìyè yǐhòu jiù niàn gāozhōng ma?
☞ ရှောင်ရွှယ်ပိယဲ့ယီဟို့ ကျို့နျန့်ကောင်းကျုံးh(င်) မား
☞ မူလတန်းအောင်ပြီးရင် အထက်တန်းကို တက်ရတာလား။
☞ Bú shì. Xiān niàn guózhōng, zài niàn gāozhōng.
☞ ပူရှစ်h ရှန်းနျန့် ကော်ကျုံးh(င်) ဇိုက်zနျန့် ကောင်းကျုံးh(င်)
☞ မဟုတ်ပါဘူး။ အလယ်တန်းကို အရင်တက်ပြီးမှ၊ အထက်တန်းကို တက်ရပါတယ်။
☞ Gāozhōng bìyè yǐhòu ne?
☞ ကောင်းကျုံးh(င်) ပိယဲ့ယီဟို့ နဲ
☞ Nà jiù kěyǐ niàn dàxué le.
☞ နာ့ကျို့ ခဲယ်းယီ နျန့်တာ့ရွှယ် လဲာ့
☞ ဒါဆိုရင်တော့ တက္ကသိုလ် တက်လို့ရပြီပေါ့။
မူလတနျး၊ အလယျတနျး၊ အထကျတနျး၊ တက်ကသိုလျစတာတှကေို ပွောဆိုတတျအောငျ ဒီသငျခနျးစာလေးကို လကေ့ငျြ့ထားပါ။
☞ ရှောငျရှယျပိယဲ့ယီဟို့ ကြို့နနျြ့ကောငျးကြုံးh(ငျ) မား
☞ မူလတနျးအောငျပွီးရငျ အထကျတနျးကို တကျရတာလား။
☞ ပူရှဈh ရှနျးနနျြ့ ကျောကြုံးh(ငျ) ဇိုကျzနနျြ့ ကောငျးကြုံးh(ငျ)
☞ မဟုတျပါဘူး။ အလယျတနျးကို အရငျတကျပွီးမှ၊ အထကျတနျးကို တကျရပါတယျ။
☞ ကောငျးကြုံးh(ငျ) ပိယဲ့ယီဟို့ နဲ
☞ နာ့ကြို့ ခဲယျးယီ နနျြ့တာ့ရှယျ လဲာ့
☞ ဒါဆိုရငျတော့ တက်ကသိုလျ တကျလို့ရပွီပေါ့။
7:05 AM C-Dialogue , Chinese
ညီလေးက မူလတန်းတက်နေတယ်၊ အစ်ကိုက အထက်တန်းပေါ့။ သင့်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေရော။
☞ Nǐ dìdi niàn jǐ nián jǐ?
☞ နီတိတီ နျန့် ကျီနျဲကျီ
☞ မင်းညီလေးက ဘယ်နှစ်တန်းတက်နေလဲ။
☞ Tā niàn xiǎoxué wǔ nián jí.
☞ ထား နျန့် ရှောင်ရွှယ် ဝူနျဲကျီ
☞ သူက မူလတန်းငါးတန်းကို တက်နေတာပါ။
☞ Nǐ gēge ne?
☞ နီကဲယ်းကဲာ့ နဲ
☞ Tā niàn gāozhōng sān nián jí.
☞ ထား နျန့် ကောင်းကျုံးh(င်) စန်းနျဲကျီ
☞ သူက အထက်တန်း တတိယနှစ် တက်နေတာပါ။
ညီလေးက မူလတနျးတကျနတေယျ၊ အဈကိုက အထကျတနျးပေါ့။ သငျ့ညီအဈကို မောငျနှမတှရေော။
☞ နီတိတီ နနျြ့ ကြီနြဲကြီ
☞ မငျးညီလေးက ဘယျနှဈတနျးတကျနလေဲ။
☞ ထား နနျြ့ ရှောငျရှယျ ဝူနြဲကြီ
☞ သူက မူလတနျးငါးတနျးကို တကျနတောပါ။
☞ နီကဲယျးကဲာ့ နဲ
☞ ထား နနျြ့ ကောငျးကြုံးh(ငျ) စနျးနြဲကြီ
☞ သူက အထကျတနျး တတိယနှဈ တကျနတောပါ။
ပေါင်မုန့် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
1:42 AM C-Word , Chinese
ပေါင်မုန့်ကတော့ အနောက်တိုင်းသားတွေ အဓိက စားသုံးလေ့ရှိတဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ။ သင်လည်း ပေါင်မုန့်တော့ ကြိုက်မှာပါနော်။
面包店 miàn bāo diàn
面包房 miàn bāo fáng
面包师 miàn bāo shī
面包师傅 miàn bāo shī fu
面包机 miàn bāo jī
面包虫 miàn bāo chóng
面包刀 miàn bāo dāo
အငန်မုန့် ( ပေါင်မုန့်အငန် )
咸面包 xián miàn bāo
甜面包 tián miàn bāo
烤面包 kǎo miàn bāo
白面包 bái miàn bāo
烤面包机 kǎo miàn bāo jī
法国面包 fǎ guó miàn bāo
小圆面包 xiǎo yuán miàn bāo
ပေါငျမုနျ့ - တရုတျလို ဘယျလိုချေါလဲ။
ပေါငျမုနျ့ကတော့ အနောကျတိုငျးသားတှေ အဓိက စားသုံးလရှေိ့တဲ့ အစားအစာတဈမြိုးပါ။ သငျလညျး ပေါငျမုနျ့တော့ ကွိုကျမှာပါနျော။
အငနျမုနျ့ ( ပေါငျမုနျ့အငနျ )
bread - Bread - BREAD - mian bao - mianbao - mian4bao1 - miàn bāo - 面包 - 麵包
ပန်းသီးက အရသာကောင်းသလို၊ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက်တစ်လုံး ပုံမှန်စားပေးသင့်ပါတယ်။
☞ Wǒ xiǎng qù mǎi píngguǒ.
☞ ဝေါရှန်(င်)ချွိ မိုင်ဖျင်း(င်)ကော်
☞ ငါ ပန်းသီး သွားဝယ်ချင်တယ်။
☞ Nǐ ài chī píngguǒ ma?
☞ နီအိုက်ချီးh ဖျင်း(င်)ကော် မား
☞ နင် ပန်းသီးစားရတာ ကြိုက်လား။
☞ Bàba zuótiān mǎi le yì jīn píngguǒ.
☞ ပါ့ပါ ဇော်zထျန်း မိုင်လဲာ့ ယိကျင်းဖျင်း(င်)ကော်
☞ အဖေ မနေ့က ပန်းသီးတစ်ကီလို ဝယ်ခဲ့တယ်။
☞ Nǐ xiànzài qù mǎi píngguǒ ma?
☞ နီ ရှန့်ဇိုက်z ချွိမိုင် ဖျင်း(င်)ကော် မား
☞ နင် အခု ပန်းသီး သွားဝယ်မလို့လား။
☞ Mèimei xǐhuan tián de píngguǒ.
☞ မေ့မေ ရှီဟွမ်း ထျန်တဲ့ ဖျင်း(င်)ကော်
☞ ညီမလေးက ချိုတဲ့ပန်းသီး ကြိုက်တယ်။
☞ Dìdi bù xǐhuan píngguǒ.
☞ တိတီ ပုရှီဟွမ်း ဖျင်း(င်)ကော်
☞ ညီလေးက ပန်းသီး မကြိုက်ဘူး။
☞ Zhè bú shì wǒ de píngguǒ.
☞ ကျဲ့hပူရှစ်h ဝေါ်တဲ့ ဖျင်း(င်)ကော်
☞ အဲ့ဒါ ငါ့ပန်းသီး မဟုတ်ဘူး။
☞ Qù chāoshì mǎi yì jīn píngguǒ.
☞ ချွိချောင်းhရှစ်h မိုင် ယိကျင်းဖျင်း(င်)ကော်
☞ စူပါမားကက်သွားပြီး ပန်းသီးတစ်ကီလို ဝယ်မယ်။
☞ Ãyí mǎi piányi de píngguǒ lái.
☞ အားယီ မိုင် ဖြန်ယိတဲ့ ဖျင်း(င်)ကော် လိုင်
☞ အဒေါ်က ဈေးသက်သာတဲ့ ပန်းသီးတွေ ဝယ်လာတယ်။
☞ Tā chī le sān ge píngguǒ.
☞ ထား ချီးhလဲာ့ စန်းကဲာ့ဖျင်း(င်)ကော်
☞ သူ ပန်းသီးသုံးလုံး စားလိုက်တယ်။
ပနျးသီးက အရသာကောငျးသလို၊ ကနျြးမာရေးအတှကျလညျး ကောငျးကြိုးပွုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တဈရကျတဈလုံး ပုံမှနျစားပေးသငျ့ပါတယျ။
☞ ဝေါရှနျ(ငျ)ခြှိ မိုငျဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ ငါ ပနျးသီး သှားဝယျခငျြတယျ။
☞ နီအိုကျခြီးh ဖငျြး(ငျ)ကျော မား
☞ နငျ ပနျးသီးစားရတာ ကွိုကျလား။
☞ ပါ့ပါ ဇျောzထနျြး မိုငျလဲာ့ ယိကငျြးဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ အဖေ မနကေ့ ပနျးသီးတဈကီလို ဝယျခဲ့တယျ။
☞ နီ ရှနျ့ဇိုကျz ခြှိမိုငျ ဖငျြး(ငျ)ကျော မား
☞ နငျ အခု ပနျးသီး သှားဝယျမလို့လား။
☞ မမေ့ေ ရှီဟှမျး ထနျြတဲ့ ဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ ညီမလေးက ခြိုတဲ့ပနျးသီး ကွိုကျတယျ။
☞ တိတီ ပုရှီဟှမျး ဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ ညီလေးက ပနျးသီး မကွိုကျဘူး။
☞ ကြဲ့hပူရှဈh ဝျေါတဲ့ ဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ အဲ့ဒါ ငါ့ပနျးသီး မဟုတျဘူး။
☞ ခြှိခြောငျးhရှဈh မိုငျ ယိကငျြးဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ စူပါမားကကျသှားပွီး ပနျးသီးတဈကီလို ဝယျမယျ။
☞ အားယီ မိုငျ ဖွနျယိတဲ့ ဖငျြး(ငျ)ကျော လိုငျ
☞ အဒျေါက ဈေးသကျသာတဲ့ ပနျးသီးတှေ ဝယျလာတယျ။
☞ ထား ခြီးhလဲာ့ စနျးကဲာ့ဖငျြး(ငျ)ကျော
☞ သူ ပနျးသီးသုံးလုံး စားလိုကျတယျ။
Apple - apple - APPLE - ping2guo3 - pingguo - píng guǒ - 苹果
စာကြည့်တိုက်မှာ စာကြည့်လို့ရသလို၊ စာအုပ်တွေလည်း ငှားဖတ်လို့ရပါတယ်။ သင်ရော စာကြည့်ရတာ သဘောကျပါသလား။
☞ Wǒ yào qù túshūguǎn jiè shū.
☞ ဝေါ်ယောက်ချွိ ထူရှူးhကွမ် ကျဲ့ရှူးh
☞ ငါ စာကြည့်တိုက်သွားပြီး စာအုပ်ငှားမလို့။
☞ Túshūguǎn jīntiān guān mén le.
☞ ထူရှူးhကွမ် ကျင်းထျန်း ကွမ်းမဲင်လဲာ့
☞ ဒီနေ့ စာကြည့်တိုက် ပိတ်တယ်။
☞ Wǒ yào qù túshūguǎn.
☞ ဝေါ်ယောက်ချွိ ထူရှူးhကွမ်
☞ ငါ စာကြည့်တိုက် သွားမယ်။
☞ Tā zài túshūguǎn dàshēng shuō huà.
☞ ထား ဇိုက်zထူရှူးhကွမ် တာ့ရှဲင်းh(င်) ရှောhဟွာ့
☞ သူ စာကြည့်တိုက်မှာ စကားအကျယ်ကြီးပြောတယ်။
☞ Wǒ xǐhuan zài túshūguǎn xuéxí.
☞ ဝေါရှီဟွမ်း ဇိုက်zထူရှူးhကွမ် ရွှဲရှီ
☞ ငါ စာကြည့်တိုက်မှာ စာလုပ်ရတာ သဘောကျတယ်။
☞ Wǒ bǎ shū huán gěi túshūguǎn le.
☞ ဝေါပါရှူးh ဟွမ်းကေ ထူရှူးhကွမ် လဲာ့
☞ ငါ စာအုပ်ကို စာကြည့်တိုက် ပြန်အပ်ပြီးပြီ။
☞ Nǐ zhīdào túshūguǎn zài nǎr ma?
☞ နီကျီးhတောက် ထူရှူးhကွမ် ဇိုက်zနာr မား
☞ စာကြည့်တိုက် ဘယ်နားမှာလဲဆိုတာ မင်းသိလား။
☞ Wǒmen yìbān zài túshūguǎn jiàn miàn.
☞ ဝေါ်မဲင် ယိပန်း ဇိုက်zထူရှူးhကွမ် ကျန့်မြန့်
☞ ငါတို့ ပုံမှန်တော့ စာကြည့်တိုက်မှာ ဆုံဖြစ်ကြတယ်။
☞ Wǒ yào qù túshūguǎn huán zhèxiē shū.
☞ ဝေါ်ယောက်ချွိ ထူရှူးhကွမ် ဟွမ် ကျဲ့hရှဲရှူးh
☞ ငါ စာကြည့်တိုက်သွားပြီး ဒီစာအုပ်တွေ ပြန်အပ်ရမယ်။
☞ Duì bu qǐ, qù túshūguǎn zěnme zǒu?
☞ တွေ့ပုချီ ချွိထူရှူးhကွမ် ဇဲင်zမဲာ့ဇိုz
☞ တဆိတ်လောက်၊ စာကြည့်တိုက်ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲ။
စာကွညျ့တိုကျမှာ စာကွညျ့လို့ရသလို၊ စာအုပျတှလေညျး ငှားဖတျလို့ရပါတယျ။ သငျရော စာကွညျ့ရတာ သဘောကပြါသလား။
☞ ဝျေါယောကျခြှိ ထူရှူးhကှမျ ကြဲ့ရှူးh
☞ ငါ စာကွညျ့တိုကျသှားပွီး စာအုပျငှားမလို့။
☞ ထူရှူးhကှမျ ကငျြးထနျြး ကှမျးမဲငျလဲာ့
☞ ဒီနေ့ စာကွညျ့တိုကျ ပိတျတယျ။
☞ ဝျေါယောကျခြှိ ထူရှူးhကှမျ
☞ ငါ စာကွညျ့တိုကျ သှားမယျ။
☞ ထား ဇိုကျzထူရှူးhကှမျ တာ့ရှဲငျးh(ငျ) ရှောhဟှာ့
☞ သူ စာကွညျ့တိုကျမှာ စကားအကယျြကွီးပွောတယျ။
☞ ဝေါရှီဟှမျး ဇိုကျzထူရှူးhကှမျ ရှဲရှီ
☞ ငါ စာကွညျ့တိုကျမှာ စာလုပျရတာ သဘောကတြယျ။
☞ ဝေါပါရှူးh ဟှမျးကေ ထူရှူးhကှမျ လဲာ့
☞ ငါ စာအုပျကို စာကွညျ့တိုကျ ပွနျအပျပွီးပွီ။
☞ နီကြီးhတောကျ ထူရှူးhကှမျ ဇိုကျzနာr မား
☞ စာကွညျ့တိုကျ ဘယျနားမှာလဲဆိုတာ မငျးသိလား။
☞ ဝျေါမဲငျ ယိပနျး ဇိုကျzထူရှူးhကှမျ ကနျြ့မွနျ့
☞ ငါတို့ ပုံမှနျတော့ စာကွညျ့တိုကျမှာ ဆုံဖွဈကွတယျ။
☞ ဝျေါယောကျခြှိ ထူရှူးhကှမျ ဟှမျ ကြဲ့hရှဲရှူးh
☞ ငါ စာကွညျ့တိုကျသှားပွီး ဒီစာအုပျတှေ ပွနျအပျရမယျ။
☞ တှပေု့ခြီ ခြှိထူရှူးhကှမျ ဇဲငျzမဲာ့ဇိုz
☞ တဆိတျလောကျ၊ စာကွညျ့တိုကျကို ဘယျလိုသှားရမလဲ။
Library - LIBRARY - library - tu2shu1guan3 - tu shu guan - tushuguan - túshūguǎn - 图书馆 - 圖書館
ကံသုံးပါး - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
Brand's ကြက်ပေါင်းရည် - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများရှိ ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ။
ကြည့်တာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
ရှိတယ်ဆိုတာ တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
အင်ဗာတာ - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။
စားတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝါကျတိုလေးများ။
ဆွေခုနစ်ဆက် မျိုးခုနစ်ဆက် အခေါ်အဝေါ်များ။
သွားခြင်းနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဝါကျတိုများ။
အချိုရည် အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
ကော်ဖီ အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
ရေ အမျိုးမျိုး အခေါ်အဝေါ်များ။
ခုနှစ်၊ လ၊ ရက် ပြောဆိုခြင်း။
ဘယ်သူ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်မလဲ။
မင်းမှာ အားသွင်းကြိုး ရှိလား။
ကြက်သီးထတယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ခေတ်အစားဆုံး အရောင်။
အိပ်မက်မက်တာကို တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
အခမဲ့ - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောလဲ။
ခွင့်ယူတယ် - တရုတ်လို ဘယ်လိုပြောသလဲ။
ပစ္စည်းအဟောင်းများ ပြန်ရောင်းရန် ကြော်ငြာ။
ဗီဇာ - တရုတ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ။